အရင်ပို့စ်အောက်က ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်သည့် မှတ်ချက်တချို့နဲ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးချက် ~ Nge Naing
အရင်ပို့စ်အောက်က ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်သည့် မှတ်ချက်တချို့နဲ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးချက်
Thursday, May 06, 2010 Nge Naing 37 comments
ဒီပို့စ်က အရင်ပို့အောက်မှာ မှတ်ချက်လာရေးတဲ့ Slip အတွက် သီးသန့် ပို့စ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အရင်ပို့စ်တခုဖြစ်တဲ့ A one to one patient (or) စပယ်ရှယ် လူနာတယောက် ပို့စ်အောက်က Slip ရဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ အဲဒီမှတ်တွေအပေါ် အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တခြားမှတ်ချက်တွေကို မဆိုင်တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ သွားပြီးဖေါင်းပွနေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ ပြန်လည် ကူးယူလာပြီး သီးသန့် ပို့စ်တခုအဖြစ် သိမ်းထားပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိက Slip ဘလော့ဂ်က C-Box မှာ ကျွန်မ သွားထားပေးခဲ့တဲ့ Link တခု ပါတ်သက်ပြီး မကျေမလည် ဖြစ်ပြီး အရင်ပို့စ်မှာ မှတ်ချက်ရေးသူ Slip ကို ကျွန်မ အတိုချုပ် အကြောင်းပြန်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Slip က မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသေးတာကို ရှင်းလင်းအောင် ပြန်ရှင်းပြချင်လို့ သီးသန့် ပို့စ်တခုအနေနဲ့ တင်ပေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီမှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးချင်သူများအနေနဲ့ ဘယ်သူမဆို အပြန်အလှန်လေးစားမှု ရှိရှိနဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ သူတွေရဲ့ အပြုအမူအတိုင်း ဆွေးနွေးကြဖို့ ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဦးတည်ရာမရှိ အဖက်သတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောဆိုတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ယုတ်ရိုင်းကြမ်းတမ်းမှုများ၊ ထိခိုက်စော်ကားလိုတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုများ အပါအ၀င် အပြုသဘောကို ဦးမတည်တဲ့ မှတ်ချက်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဆွေးနွေးကြဖို့ အားလုံးကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကျနော့် cbox မှာ အစ်မ ရေးသွားတာ တစ်ခုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော် ဒီနေရာမှာ ဖြေရှင်းမှုတစ်ခု လုပ်ချင်ပါတယ်။ တခြားနေရာမှာ လုပ်စရာလဲ မရှိလို့ပါ။ ပြီးတော့ အစ်မ က စိတ်ဝင်တစား လာပြောထားတာဆိုတော့ အစ်မ သိချင်တာလေးတွေ သိရအောင်ပါ။
ပထမဆုံး ပြဿနာလေးကို အားလုံးသိအောင် ကျနော် ချပြပါမယ်။
ကျနော့်စီဘောက်စ်မှာ အစ်မရေးခဲ့တဲ့ စာက
Nge Naing: http://www.hittai.net/?show=rm&fileid=5&t=home4&id=4 မဗေဒါရဲ့ပို့စ်နဲ့ စာရင် ဒီပို့စ်က Slip တို့ကို အများကြီး ထိခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်
Nge Naing: တချို့အချက်တွေက Slip တို့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်
အစ်မ အဲ့လို ရေးခဲ့တယ်နော်။ ကောင်းပြီ။
အစ်မ ခုမှ တွေ့တဲ့ အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပက် စတင်တဲ့နေ့ကတည်းက ကျနော် ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။ အောက်မှ comment ပေးလို့မရသလို ဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့မရလို့ ကျနော် ဘာမှမပြောခဲ့တာပါ။ မှန်နေလို့ ငြိမ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ် အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးကို
ကနေ copy လုပ်ပြီး ပြန်တင်ထားပါတယ်။ အောက်မှာ comment box ရှိလို့ ကျနော် ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ကျနော့် comment ကို မတင်ပေးပါဘူး။ အစ်မ ပြောလို့ ကျနော်သွားပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သူ တင်ပေးမယ် ဆိုရင် သူတင်တဲ့ အချိန်နဲ့ အစ်မ ကျနော့်ဆီကို လာပြောတဲ့အချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ အစ်မ ဖတ်ချင်တဲ့ ငြင်းလို့မရတာဆိုတာကို ကျနော် ဆက်ပြောပါမယ်။ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံဘလော့တွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျနော်ရလာတဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ cbox မှာ ရေးပြီးရင် (သို့) comment ပေးပြီးရင် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ပြန်သိမ်းထားတတ်တာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဘလော့တွေက ကိုယ်ပေးတာကို တင်ချင်မှတင်တတ်ကြသလို အချိန်မရွေး အကြောင်းပြချက်မရှိ ဖျက်တတ်လို့ပါ။ ကျနော် သူ့ဆီမှာ ရေးခဲ့တဲ့ comment ကို ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးပါမယ်။
အစ်မက ငြင်းလို့မရဘူးလို့ ကျနော့်ကို လာပြောထားတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာတွေကို အစ်မ ပြည့်ပြည့်ဝဝ လက်ခံထားပုံပါပဲ။ ကောင်းပြီး ကျနော်တို့ ကောက်နုပ်ရအောင်
""ထိုမှတစ်ဆင့် နအဖမှ လက်သပ်မွေးထားသော ဗိုလ်ပေါက်စများသည် ဂူးဂယ်လ်မှ အခမဲ့ပေးသော ဘလော့ဂ်များ ထောင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားခြင်း၊ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ညစ်ညမ်းရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားခြင်းတို့ကိုအဆက်မပြတ် လုပ်နေကြပါတယ်။""
ဂူးဂယ်လ်မှ အခမဲ့ပေးတဲ့ဘလော့တွေကို အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံမကောင်းကြောင်း အများဆုံးရေးနေတာတော့ တခြား ဒီမိုဘလော့တွေပါ။ မယုံရင် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ၁ အချိုး ၂၀ ရှိပါတယ်။
**နအဖမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အခြားဘာသာဝင်တွေကြား အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသော ဘလော့ဂ်အမည်တွေမှာ
၁၊ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးအသင်းတော် http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၄၊ မြန်မာ့အလင်း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက်စေတမန် http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိတောက်မြေ http://padaukmyay.blogspot.com/ **
၁ ကနေ ၄ ထိ က အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဆန့်ကျင်ရေးထားတာပါ။ ၅ က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆန့်ကျင်ရေးထားတာပါ။ တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာ ဖတ်ကြည့်တဲ့လူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ ဘလော့ကို ကနေဒါက ကိုဇော်မျိုးရေးတယ်။ နံပတ် ၅ ဘလော့နဲ့ အပေါ်က ၄ ခု အကြီးအကျယ် ပြဿနာ တတ်ဖူးတာကို အစ်မက ဘလော့သက်တမ်း ၁ နှစ်တောင် မပြည့်သေးတော့ လက်လှမ်းမှီမယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်မ တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး ထောက်ပြ ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှာဖတ်ပြီးမှ ပြောသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ပိတောက်မြေ ကိုတော့ မကျေနပ်လို့ထည့်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
**ရုရှားရောက် စစ်သည် တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဘူးတဲ့ မြန်မာ သံဃာတစ်ပါးက (ရုရှားမှာနေတဲ့ စစ်သားလေးက တပည့်တော်တို့က ကျောင်းနေ နေတာပါ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းတွေကို ရေးချင်လို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုစာတွေကို စစ်အစိုးရ အကြိုက် ရေးပေးတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့က တစ်လကို ဒေါ်လာ ၅၀ ပိုပေး ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၅၀ ပိုရတဲ့အတွက် ကျောင်းစရိတ် ကာမိအောင် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် တပည့်တော်တို့က မရေးချင်ပဲနဲ့ရေးနေရပါတယ်) လို့ပြောတာ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတယ်။
အမှန်တကယ်ပဲ သံဃာတစ်ပါးက ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် ကျနော် မသိပါဘူး။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး သံဃာဆိုတာ အနန္တဂိုဏ်းဝင်မို့ပါ။ ဖတ်တဲ့သူ၊ နားထောင်တဲ့သူကတော့ ဦးနောက်နဲ့ ချင့်ချိန်ယုံသင့်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဒေါ်လာ ၅၀ ပို ရမယ်ဆိုရင် အားလုံး ရေးနေကြမှာပါ။ ရုရှားမှာ ကျောင်းသား ၆ ယောက်ထက်ကျော်တာတော့ သေချာတယ်။ ဘာကြေင့် ဘလော့ ၆ ခုတည်း ဖြစ်နေတာလဲ?? အစ်မယုံကြည်သလို၊ ဆောင်းပါးရှင်ပြောသလို မှန်တယ်ဆိုရင် ဒီမိုအတိုက်အခံ ဘလော့တွေထက်တောင် ၁၀ ဆ မက များသွားပါအုံးမယ်။ ကျနော်လို စာဖတ်၊ စာရေး ဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုရင် ဘလော့ တစ်ခုကို ဒေါ်လာ ၅၀ ရရင် တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ဘလော့ ၁၀ ခုလောက် ထိုင်ရေးနေမှာ။ ၅၀၀ ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ရုရှားက ထွက်လာတဲ့ ဘလော့တွေလည်း ဒီလောက် နည်းနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ခုလောလောဆယ် ဘယ်သူတွေရေးတဲ့ ဘလော့တွေ ပိုများလဲ စာဖတ်နေတဲ့သူတွေ ပိုသိပါတယ်။ ဒါဆို သူတို့တွေကရော ဒေါ်လာရနေလို့လား ?? မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်မဖြေလိုပါဘူး။
အဲ့ဒီဘလော့မှာ သွားကြည့်ပါ။ google က free ရတဲ့ ဘလော့တွေ ဘာကြောင့်ရေးကြတယ်။ ဘလော့ပေါင်း ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာ အဲ့သြဖွယ် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက အပေါ်က သံဃာတစ်ပါး ပြောတယ် ဆိုတဲ့ ထဲမှာ ကျောင်းစရိတ် ကာမိအောင် ဆိုတာ ပါနေပါတယ်။ ရုရှားက ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကျောင်းစရိတ်က တစ်လကို ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်မှာလား ??ဒါဆို ၁ နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း တတ်ရင်တောင် တစ်နှစ် ၆ သိန်း မကပါဘူး။ အစ်မအသက်အရွယ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး ယုံကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်အနေနဲ့လည်း ရေးချင်ရင် သေချာ စုံစမ်းပြီးမှ ယုတ္တိရှိရှိ ရေးသင့်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝမရှိမှန်းသိရက်နဲ့ ဘာအတွက် ရေးနေတာလည်းဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလိုလို့ ဘလော့ရေးတယ်ဆိုတာ သူများမဟုတ်ပဲ ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေလား??
**ရုရှားရောက်စစ်သည်ခပ်များများမှာ အွန်လိုင်းမှ မြန်မာ မိန်းကလေးများကို ချစ်သူရည်းစား ထားကြ ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ နေတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သူမ၏ ရုရှရောက် ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် ချစ်သူက (လူတွေသွေး ဆူလာအောင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ ရေးပေး ရတယ်။ ဒါမှ မြန်မာပြည် ပြန်ရင် အထက်က အရာရှိဆီမှာ မျက်နှာပန်းလှပြီး ကြယ်ပွင့်များများ တပ်ရမယ်)ဟု ပြောပြပါတယ်။**
တော်တော် ရသမြောက်တဲ့ ဟာသ တစ်ခုလိုပါပဲ။ စာတစ်ပိုဒ်လုံးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတယ်။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဘလော့ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?? လူတွေသွေးဆူလာအောင် ရေးနေတဲ့ ဘလော့တွေက ဘယ်ဘလော့တွေလဲ ??
ဒီနေ့တိုက်မယ်၊ မနက်ဖြန်ဆန္ဒပြမယ် အော်နေတာ ဘယ်ဘလော့တွေလဲ ??
ပုံမျိုးစုံကို ဖျက်ညှက်ကပ် လုပ်နေတာ ဘယ်ဘလော့တွေလဲ ??
တစ်နေ့ကို ပိုစ့်တစ်ခု တင်နေတာ ဘယ်ဘလော့တွေလဲ ??
လက်ခံသူတွေအနေနဲ့ မွးရာပါ ဦးနောက်လေးနဲ့ သေချာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရုရှားက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သွေးဆူစေတဲ့ ဘလော့ တစ်ခုလောက် ဥပမာ ပေးပြီး ပြောသင့်တယ်။ မရှိမှန်းသိရင်လည်း အစကတည်းက မရေးသင့်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ရိုင်းစိုင်းတာတွေကိုတော့ ကျနော် ပြမယ်။
(18 နှစ်အောက် များ လင့်များကို မကြည့်ပါနဲ့)
သွးဆူအောင် အမျိုးမျိုးလုပ်နေတဲ့ ဘလော့တွေကိုတော့ ကျနော် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ကိုဒေါ်လာ ရဲ့ ဘလော့မှာ သွားကြည့်ပါ။
အဲ့ဒီဘလော့တွေ၊ ပုံတွေကိုရော ရုရှားက လုပ်တယ် ပြောအုံးမလား။ ?? ဘယ်သူတွေလုပ်တာလဲ ??။ ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ ??။ အဲ့ဒီ ရိုင်းဆိုင်းမှုတွေကိုရော အစ်မတို့ လက်ခံလား။ လက်မခံရင် ဘာကြောင့် သူတို့ကို မပြောပဲ အထောက်အထားမရှိတဲ့ ရုရှားကကျောင်းသားတွေက ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဘလော့ရေးပါတယ်ဆိုတာကိုမှ ယုံကြည်ရတာလဲ ?? ။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်ဘလော့လဲ ?? ရုရှားမှာ ကျောင်းသားတွေ မနည်းပါဘူး။ ကျနော် ပြ သလို ၃ ခုပဲ ထုတ်ပြပါ။ ဘယ်သူပြနိုင်လဲ ??။ ဆောင်းပါးရှင် ပြနိုင်လား။ ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ မငယ်နိုင် ပြနိုင်လား ?? ဆောင်းပါးရှင်က အထောက်အထားမရှိ ရေးထားတာကို မငယ်နိုင်က ဘာကြောင့် မျက်စီစုံမှိတ်ယုံရတာလဲ ?? ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါးရှင်က ပထမပိုင်းမှာ ဘလော့ရေးရင် ဒေါ်လာ ၅၀ ပိုရတယ် ဆိုတာကနေ အခု ကြယ်ပွင့်တွေပါ များများတပ်ရတယ်ဆိုတော့ ဘလော့ရဲ့ တန်ခိုးက တော်တော်လေးကို ကြီးနေပါတယ်။ ကျနော်ဆိုရင် master ပထမနှစ်ကတည်းက ဘလော့ရေးလာတာ Ph.D ပြီးလို့ ပြန်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရုရှားက ကျောင်းသား ၉၀ ရာခိုင်နှုံးက ဘလော့မရေးကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ?? စစ်သက်ထက် ဘလော့သက်က ရာထူးတိုးဖို့ အရေးကြီးမှာလား ??။ ကျနော်ပြောနေကျ စကားတိုင်း ပြောရရင် ဥပမာလေး တစ်ယောက်လောက် ပြပါလား။ ဘာကြောင့် ဆောင်းပါးရှင်က မပြနိုင်တာလဲ?? ဒီအကြောင်းတွေကို အထောက်အထားမရှိ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိ ပဲ ယုံတာကတော့ မငယ်နိုင် ဥာဏ်တိမ်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မူရင်း စာရေးသူရော တဆင့်ပြန် ကူးချပြီး ပြန်တင်သူရော ယုံကြည်သူ မငယ်နိုင် အပါအဝင် စာဖတ်သူများပါ သေချာ စဉ်းစားပြီး အမှန်တရားကို သိရှိလက်ခံနိုင်ပါစေ။ စာဖတ်သူအားလုံးကို လေးစားလျှက်....
ကျန်တဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ ထားပါ ။ ၀င်ပ်ါတ်သက်စရာကို မရှိဘူး။
ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး နက်ထဲ အခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲနေတာကတော့ တမျိုးဘဲ။
နက်ထဲရေးနေတာတလွဲသတင်းတွေကို စာရင်းလုပ်ရင် မနဲဘူး ။
ခုလဲ ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ရုရှက ညီငယ်တွေကို ဆွဲထည့်တာတော့ မဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူးဘဲ ပြောရမှာဘဲ။
ဘာသာရေးဆို နကန်းတလုံးမှမသိတဲ့ သူသွားပြောရင်တော့ ယုံချင်ယုံမယ် ။
ခုလက်ရှိရှိနေသေးတဲ့ သူတွေခဏလေးဖယ်ထားပါ ။ ( လက်ရှိလူတွေသက်သေပြရင် အဲဘာသာရေးဆိုက်တွေမှာ လာပေါက်ကရရေးရင် အာရုံနောက်လွန်းလို့)
ဒီမှာ ကိုဆော်လမွန် http://solomonn.0fees.net/wordpress/
သူတို့ ၂ယောက်ရေးခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးစာပေတွေကိုဘဲ ကိုယ်လိုက်မီလား သွားလေ့လာကြစေချင်တယ် ။
ခုဟစ်တိုင်က သတင်းထဲဖေါ်ပြတဲ့blogs (ဆိုတာ)တွေရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ နှိုင်းစာကြည့်ပါ ။
ကောင်းပြီလေ ။ ဒါက မှန်ကန်သောတင်ပြမှုကို ပြောနေလို့။
မှားနေတာတောင် သူတို့ သဘောက သူတို့ရပ်တည်မှုကို ဗြောင်ရပ်တည်ငြင်းရဲပါတယ်
မယုံရင် nativemyanmar forum , padonma forum and planet forum မှာ kominmaung ဆိုတဲ့နစ်ကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ ။
ဒီတော့ လေဖမ်းဝတန်းချီ ။ သက်သေမဲ့စွပ်စွဲတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ ။
ဒီသတင်းဋ္ဌာနဆိုတာတွေ တာဝန်မဲ့ရေးချင်တာရေးနေတာ စိတ်ကုန်နေတာ ကြာလှဘီ
dvb က ၂၀၀၈မှာ စူနာမီဆရာတော်ဆိုတာကို ဒီမို သူရဲကောင်းလိုလို လုပ်တာ
ခုတလောက irrawaddy က ဦးကောသလဇင်းမယ်တရားပွဲကို သာသနာပြု သူရဲဂေါင်းဂျီးလုပ်တာတွေက ဥပမာအများကြီးထဲတချို့ ဘဲ ။
Slip ရေ- အစ်မက C-Box မှာ အဲဒီပို့စ် ရှိကြောင်းကို သတင်းသွားပေးထားလို့၊ ဒီမှာ ပြန်လာရေးထားတယ်၊ ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးစွာ ဆန္ဒဖေါ်ပြတာကို လေးစားတဲ့ သဘောနဲ့ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ လက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ထပ်တက်လာပြီး မဆိုင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ဖေါင်းပွလာမှာကိုတော့ အစ်မ မဖြစ်ချင်ဘူး။ Slip ထင်သလို အစ်မက အကုန်လုံးကို ယုံကြည်လို့ လာထည့်ထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက ဒီလိုပြောထားတာတွေ ရှိတယ် တချို့အချက်တွေက ငြင်းလို့မရတာတွေလည်း ရှိနိင်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြတာသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ အစ်မလည်း အသေးစိတ် အချက်အလက် တခုခုကို ဖေါ်ပြရင် Reference အတိအကျ ရှိသင့်ကြောင်း အကြံပေးတဲ့ မှတ်ချက်တခုတောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Slip ညွန်းထားတဲ့ ဒေါ်လာစားပြီး ဆူပူအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်စာရင်းထဲမှာ အစ်မဘလော့ဂ်လည်း ပါတယ်။ သူများစားမစား အစ်မမသိပေမဲ့ အစ်မ ဒေါ်လာမရတာတေ့ အစ်မ အတိအကျ သိလို့ အဲဒါတခုတည်းနဲ့တင် Slip တို့ စွပ်စွဲနေတဲ့ အချက်တွေဟာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ အဖြေကရှင်းနေပါတယ်။ နောက်တခုက အခု Slip မှတ်ချက်တွေ လာရေးတာ Slip စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို အစ်မတို့သိအောင် လာပြီး ဖေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်မှာ Slip မှတ်ချက်ကို ဖေါ်ပြခွင့်မရလို့ Slip ခံစားရတဲ့ ခံစားမှုဟာ မိမိဆန္ဒကို ဖေါ်ပြခွင့် မရလို့ ဖြစ်ရတဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုပါ။ ထိုနည်းအတူ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ဆူပူအောင် လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး မိမိဆန္ဒကို လူသိအောင် လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ဆူပူတာနဲ့ ဆန္ဒပြတာနဲ့ဟာ မတူပါဘူး။ အစ်မက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာကိုပဲ လက်ခံတယ် ဆူပူတာကို လက်မခံဘူး။ ထိုနည်းအတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာကို ဆူပူတယ်လို့ စွပ်စွဲတာကိုလည်း လက်မခံပါဘူးဆိုတာ Slip လာရေးထားတဲ့ အချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားတဲ့အနေနဲ့ အစ်မပို့စ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပေမဲ့ အစ်မတိုချုပ်ပြီး အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မပို့စ်က ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်ပါဆရာ။ အဲဒါ ကျွန်မပို့စ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ Slip C-Box မှာ ကျွန်မက သွားရေးထားလို့ သူကဒီမှာ ပြန်လာရေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဆရာတို့ ဒီမှာ ဆွေးနွေးနေရင် ကျွန်မပို့စ်ရဲ့ Agenda လွဲကုန်မှာဖြစ်လို့ ဆွေးနွေးချင်ရင် ဒီထဲမှာတော့ ဆွေးနွေးလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီအကြာင်းကို ထပ်ဆွေးနွေးချင်သူများများ ရှိရင် C-Box မှာ စာရင်းပေးခဲ့ပါ။ ဆွေးနွေးချင်သူ များနေရင် Slip ရေးထားတာရော ဆရာရေးထားတာပါ ကော်ပီ ပြန်ကူးပြီး ကျွန်မ ပို့စ်တခု အဖြစ်ပြန်တင်ပေးမယ်။ ဒီထဲမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မဆိုင်တာ ဆွေးနွေးခြင်း သည်းခံပေးကြပါ။
ဟိုတလောက အာဇာနည်နဲ့ နစ်နေမန်းကို ဘလော့ စားခွက်လုတာ မှတ်မိသေးတယ်ဗျား... ဒေါ်လာ မရပေလို့ပဲ ကိုယ်ကျိုးတောင်စွန့်ပြီး ဘလော့စားခွက်ကို တောင် ပြိုင်လုရတယ် မှတ်သားစရာပါ။
မငယ်နိုင် ပြန်ပေးထားတဲ့ comment က ကျနော်ဖြေရှင်ထားတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလို မူလ မငယ်နိုင်လင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့လဲ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
မငယ်နိုင် ပြောခဲ့တာကို မငယ်နိုင် အချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်စီဘောက်စ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ မငယ်နိုင်ပြောခဲ့တာက
Nge Naing: တချို့အချက်တွေက Slip တို့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဆိုတဲ့ စာက မငယ်နိုင် ရေးခဲ့တာပါ။ မငယ်နိုင် အဲ့လို ပြောကတည်းက ဆောင်းပါးမှာပါနေတာတွေကို လက်ခံလို့ ပြောတာပဲ။ ကျနော်တို့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေကို တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ ?? စာကြောင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာ ပြန်ကြည့်ပါ။ အမှန်တွေကိုရေးထားလို့ ကျနော်တို့ ငြင်းလို့မရတဲ့သဘောမျိုး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က တစ်ခုချင်းအထောက်အထားနဲ့ ရှင်းခဲ့တာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကျနော် မငယ်နိုင်ကို ဘာစွပ်စွဲဖူးလို့ ကျနော် စွပ်စွဲသလို မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို သုံးရတာလဲ ??။
ကျနော်က ဒီဘလော့မှာ ကွန်းမန့်ရေးဖို့ စိတ်ကူးလည်း မရှိပါဘူး။ အစီစဉ်လည်း မရှိပါဘူး။ အပေါ်မှာ မငယ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်ဆိုတာကြောင့် ပြန်ရှင်းထားတာပါ။ ကျနော် ပြောခဲ့တာတွေက အဓိပ္ပါယ်ရှိလား၊ ဆောင်းပါးမှာရေးထားတာတွေက အဓိပ္ပါယ်ရှိလားဆိုတာ မငယ်နိုင် ဥာဏ်မတိမ်တော့ရင် အဖြေကို ရိုးရှင်းစွာသိလာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်အခု ဆွေးနွေးနေတာ
ဆိုတဲ့ စာနှစ်ကြောင်းအတွက်ပါ။ အားလုံးကိုလည်း အပေါ်က comment တွေမှာ အထောက်နဲ့ အထားနဲ့ ရှင်းထားပြီးပါပြီ။ တစ်ကြိမ်နဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိရင် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် ပြန်ဖတ်ပါ။ မငယ်နိုင်ပေးခဲ့တဲ့ လင့်နဲ့ မငယ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့ စကားကြောင့် ဒီ comment တွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါကို မငယ်နိုင်က ဖျက်ချင်သေးတာလား ?? ။ ကောင်းပြီ ဒါဆို ကျနော် တစ်ခုပဲ မေးမယ် မငယ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့
*တချို့အချက်တွေက Slip တို့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်*
ဆိုတာ ဘယ်အချက်တွေကိုပြောတာလဲ ??
ကျနော် အစကတည်းက မငယ်နိုင်ကို အခုလို မမေးချင်လို့ အားလုံးကို ခြုံပြီး ရှင်းခဲ့တာပါ။ ကျနော် ပြောခဲ့တာတွေအတွက် ကျနော် တစ်လုံးမကျန်တာဝန်ယူတယ်။ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ထောက်ပြဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
မငယ်နိုင်ကလည်း ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားအတွက် တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မငယ်နိုင်ပြောတဲ့ ကျနော်တို့ ငြင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဆိုတာ ကိုပဲ ကျနော် ဆက်ရှင်းပါမယ်။ ဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတာကို မငယ်နိုင် ရှေ့နောက် ညီညီ ဆက်ပြောစေချင်ပါတယ်။
Slip မေးတာတွေက အများကြီးပဲ....မငယ်နိုင် ပြန်ဖြေတာက လိုရင်းမရောက်ပါဘူး... မေးခွန်းလေးတွေကို နားလည်အောင် သေချာဖတ်ပြီး ပြန်စာရေးသင့်ပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်တွေကိုမဆဲနဲ့ . . . သူတို့က ပိုပြီးဆဲတတ်တယ်။ နအဖမကောင်းဘူးမပြောနဲ့ သူတို့က နားညည်းအောင် ဖင်ပိတ်ပြီးငြင်းလိမ့်မယ်။ သို့သော် . . “စစ်တပ်နဲ့နအဖဘာကွာလဲ?” လို့မေးလိုက်ပါ။ ဒင်းတို့ ချက်ချင်းထွက်ပြေးအံ့ =P
(အရင်ပို့စ် အောက်က ကူးလာတဲ့မှတ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ )
ရေးထားတဲ့ Slip ရဲ့ မှတ်ချက်တွေက ဟစ်တိုင်က ကူးယူပြီး ရွှေမြန်မာတို့အတွက် အသိနဲ့သတိ မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Slip ရဲ့ C-Box မှာ ကျွန်မက ဒီအကြောင်း သွားရေးခဲ့လို့ Slip ရဲ့ မှတ်ချက်တွေက ကျွန်မဆီ ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားမရေးခင် Slip ဘလော့ဂ်ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဆီမှာ အမြဲတမ်း အဆက်မပြတ်လာပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်လာရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ခြေရာခံ လိုက်သွားတော့ ဒေါ်လာရလို့ ဘလော့ဂ်ရေးနေတယ်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ် list ထဲမှာ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Side bar မှာရှိတဲ့ အတုယူသင့်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလို့ ရေးထားတဲ့ list ထဲက ဘလော့ဂ်တွေမှာ တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လိုက်ကြည့်တော့ အကြောင်းအရာ စုံပြီး တကယ်လည်း ကောင်းတဲ့ မီးပြတိုက် ဘလောဂ်တခုကို ထူးထူးခြားခြား ကျွန်မသဘောကျခဲ့တယ်။ နောက်တခါ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လာလည်ခဲ့တဲ့အထဲက စစ်သားတွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ ကဗျာပို့စ်မှာ Slip နာမည်နဲ့ မှတ်ချက် ထားခဲ့တဲ့ link ကိုလိုက်သွားတော့ ဒီဘလော့ဂ်ကို ပြန်တွေ့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း မှတ်သားသင့်တဲ့ ဘလော့ဂ်တခုအနေနဲ့ အမြဲသွားလည်တဲ့ ဘလော့ဂ် list ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါက မှတ်ချက်ရေးထားတဲ့ Slip ဘလော့ဂ်ကို ကျွန်မရောက်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်တွေပါ။
Slip ရဲ့ C-Box မှာ ကျွန်မ သွားရေးတဲ့ ဟစ်တိုင်က တင်ထားတဲ့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်" ဆိုတာက ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ ဒီထဲမှာ ရေးထားတာတွေကို ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်တယ် မဟုတ်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်လည် တုံ့ပြန်စေချင်တဲ့ သဘောပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်မက အပြည့်အ၀ ယုံလို့ Slip ကိုထောက်ပြတယ်လို့ Slip က ထင်တယ်။ ကျွန်မက ယုံကြည် မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်လည်း တခုမှ ပြောထားတာ မပါပါဘူး။ အဲဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မက အထောက်အထား ရှိဖို့လိုတယ်လို့တောင် မှတ်ချက်မှာ အကြံပြုခဲ့သေးတယ်။ ဒါကို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းထား ငြင်းထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Slip ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို လက်ခံပါတယ်။ ယုံတယ် မယုံဘူးဆိုတာက အထောက်အထားနဲ့ ခံယူသူရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လို့ ကျွန်မ သတ်မှတ်တယ်။
Slip ငြင်းတားတာကို လက်ခံလို့ ရပေမဲ့ ဒေါ်လာစားပြီး ဘလော့ဂ်ရေးနေတယ်လို့ ကျွန်မတို့ကို စွပ်စွဲထားတာ အပါအ၀င် Slip ရေးထားတဲ့ အထဲက ကျွန်မ စာလုံးအပြာနဲ့ လိုက်လုပ်ထားတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ ကျွန်မ လက်မခံဘူး။ ဒီအချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်မှတ်ချက်ထဲမှာ ကျွန်မ ပြောထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ အခု ပြောတာက ကျွန်မနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်ရှိပေမဲ့ သာမန် ဘလော့ဂါတဦးအနေနဲ့ အသိပေးတာသာ ဖြစ်ပြီး Slip က ဒီပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာ အကုန်လုံးကို ကျွန်မက လက်ခံလို့ လာပြောတယ် ထင်နေပြီး (Serious) ဖြစ်နေတာကို Slip ထင်သလို မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ရှင်းပြတာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ လက်ခံတာ ယုံကြည်တာ ဆိုရင် ကျွန်မ အားလုံး တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မက အကုန်လုံးကို လက်ခံယုံကြည်ပြီး သဘောကျတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်လည်ဖေါ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ပြန်ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပို့စ်တွေ ကို ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် ပို့စ်တွေထက် လူဖတ်သမားပိုများပြီး ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အဲဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်တာကို ဆွေးနွေးလာတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း အားလုံးကို တာဝန်ယူပြီး ပြန်ဖြေရှင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်က ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ရှိပါတယ် သွားဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဘယ်လဲဘာလဲ မြန်မာပြည်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျွန်မပြန်ဖေါ်ပြထားလို့ အဲဒါနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လာသမျှမှတ်ချက်အားလုံးကို ကျွန်မတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ပို့စ်ရဲ့ အာဘော်တွေကို ကျွန်မ မပြည့်အ၀လက်ခံလို့ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Slip ကို Link သွားပေးတဲ့ ပို့စ်က ဖတ်စေချင်လို့ သွားပေးတာသာဖြစ်ပြီး အပြည့်အ၀ ယုံကြည်လက်ခံထားတာ မဟုတ်၊ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ ပို့စ်လည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် Slip က ဒီပို့စ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို တခုချင်း ထောက်ပြထားတာကို ကျွန်မ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းစရာ မလိုပါဘူး။
Slip ပြောတဲ့ ယုတ်ရိုင်းတဲ့ Link တွေကို ကျွန်မ တွေ့ပြီးပါပြီ။ ဗိုလ်သန်းရွှေပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အောက်တန်းကျပြီး ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း လုပ်တာကို ဘယ်သူပဲ လုပ်လုပ် လုပ်တဲ့သူ အားလုံးကို ကျွန်မ ရှုပ်ချပါတယ်။ ဒီလို ကျက်သရေနည်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ပုံတွေကို ကျွန်မတို့ဆီမှာ လာတင်ရင်တော့ ဖျက်ပစ်ပြီး တုံ့ပြန်ဖို့လိုရင် တုံ့ပြန်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ဖါသာသူ လုပ်ထားတာကို တော့ သူများအကုသိုလ်ကို သွားဝေယူတဲ့ ပုံစံနဲ့ အဲဒီယုတ်ညံ့သူတွေနဲ့ အဖက်လုပ်ပြီး ကျွန်မအနေနဲ့ ဘာမှ သွားပြောစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်မဆီမှာ တခြား ယုတ်ရိုင်းတဲ့ ပြည့်တန်ဆာပုံတွေ လာတင်ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ဆိုရေးရှိက ဆိုရလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်တခုနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု Slip တင်ထားတဲ့ ပုံတွေပါတဲ့ link ကိုတော့ ကျွန်မဆီမှာ ဘယ်သူမှ လာမတင်ဖူးဘူး လာတင်ရင်လည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ အခု Slip က ဥပမာပေးပြီး မေးလာလို့ အပျက်သဘောနဲ့ လာတင်တာမဟုတ်ဘူး ဆွေးနွေးရင်း လာတင်ထားလို့ မဖျက်ဘဲ ထားတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မဆိုလိုချင်တာကို Slip သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ဆရာတင့် - ဆရာပေးထားတဲ့ link တွေကို သွားတော့ သွားမကြည့်ရသေးဘူး။ ကျွန်မ အချိန်ရရင်တော့ လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်။ တခြားဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ ဆွေးနွေးထားတာတွေကို ကျွန်မ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (((("dvb က ၂၀၀၈မှာ စူနာမီဆရာတော်ဆိုတာကို ဒီမို သူရဲကောင်းလိုလို လုပ်တာ
ခုတလောက irrawaddy က ဦးကောသလဇင်းမယ်တရားပွဲကို သာသနာပြု သူရဲဂေါင်းဂျီးလုပ်တာတွေက ဥပမာအများကြီးထဲတချို့ ဘဲ ။ )))))) အဲဒါကိုတော့ ကျွန်မ မသိဘူး။ ဆရာ ဒီထက်ပိုပြည့်စုံအောင် ပြောပေးရင်တော့ ကောင်းမယ်။
ဲJalann- Slip ဒီပို့စ်က ကျွန်မအာဘော်မဟုတ် ကျွန်မယုံကြည်လက်ခံလို့ ပြန်လည် ကူးယူဖေါ်ပြထားတဲ့ ပို့စ်လည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်တခုလုံးကို တုံ့ပြန်ပြီး Slip မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအကုန်လုံးကို ကျွန်မ ဖြေစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မနဲ့ ဆိုင်တာကိုပဲ ကျွန်မ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု ကျွန်မ ရှင်းပြထားပြီးပြီဆိုတော့ Jalann လည်း သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့မြန်မာခေါ် ကိုဇော်မျိုး- စစ်ဗိုလ်တွေကိုမှ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဆဲတတ်ပါဘူး။ ဆဲတာဆိုတာကိုလည်း သိပ်ရွံတတ်လို့ ကျွန်မ C-Box မှာ ဖြစ်စေ၊ မှတ်ချက်မှာ ဖြစ်စေ ဆဲဆိုတာ၊ ယုတ်ရိုင်းတာ ဘာတခုမှ လက်မခံဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ပညာရှင်အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ နောက်တခါ လာရေးရင် သူများကို Assault ဖြစ်စေတဲ့ စကားလုံးတွေ မပါအောင် ရေးပေးဖို့ ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
May 6, 2010 at 12:36 PM Reply
(နောက်တခါ လာရေးရင် သူများကို Assault ဖြစ်စေတဲ့ စကားလုံးတွေ မပါအောင် ရေးပေးဖို့ ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။)
အစ်မရေ။ ကျနော်က စကားကို တည့်တည့်ပဲပြောတတ်ပါတယ်။ အစ်မတို့လို ကွေ့ပတ်ပြီးမပြောတတ်ပါဘူး။ ဘလော့လောကမှာ သန်းရွှေ၊ စုကြည်၊ အောင်ရွှေ ဆိုပြီးမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောတာတွေအများကြီးပါ။ ကျနော့ကို မပြုပြင်ခင်.. ကိုအဖိုး/အဖွားအရွယ်တွေကို ဆဲဆိုနေသူတွေကို အရင်ပြောလိုက်ပါဦးဗျာ။ ကျနော်ပြောတဲ့စကားက သရော်တာ.. ဒါမှမဟုတ်.. ခနဲ့တဲ့ အဆင့်ပါပဲ။ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးကို ခံစားချက် ပြင်းထန်နေတာ လူမြင်လို့မကောင်းပါဘူး။
နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ရိုရိုသေသေပြောပါလို့တော့ . . . မဆုံးမပါနဲ့။ အစ်မအပါအ၀င် ဒီမိုနဲ့ နအဖတွေကို လုံးဝ မလေးစားနိုင်ပါဘူး။ (စိတ်မဆိုးပါနဲ့. . . ရိုသေထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရင် တစ်ခုလောက် ပြောပြပါ။ ရိုသေထိုက်မှ ရိုသေပါမယ်။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ လူတိုင်းကို ရိုသေပြတဲ့ စိတ်ထားကျုပ်မှာလုံးဝမရှိပါ) ကျုပ်တို့လူငယ်အချင်းချင်း ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေအကြား အမုန်းအဃာတတွေပဲ ထည့်ပေးနေတဲ့သူတွေကို ရိုသေထိုက်သလား? ဒီမိုသမားအဖိုးကြီးတွေက … နအဖထောက်ခံသူတွေကို မုံန်းတီးဖို့ အားပေးတယ်။ နအဖအဖိုးကြီးတွေက ဒီမိုသမားတွေကို မုံန်းတီးဖို့ အားပေးတယ်။ အဲလိုလူကြီးမပီသတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် လေးစားပြရမှာလဲ? အမြဲဆိုသလို အတင်းအဖျင်းတွေပြောပြီး… မကြီးမငယ်ရန်ဖြစ်နေသူတွေကို မလေးစားနိုင်တဲ့ ကျုပ်မှာ အပြစ်ရှိသလား?
တကယ်တော့ အစ်မတို့လည်း အချင်းချင်း မလေးစားပါဘူးဗျာ။ ဟန်ဆောင် နေကြတာပါ။ ကျုပ်က ဟန်မဆောင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မဆဲဘူး။ ခနဲ့တာတော့ ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲလောက်လေးတောင် ခံနိုင်ရည်မရှိဘူးဆိုရင် နိုင်ငံရေး ဇတ်ခုံပေါ်မတက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုပါတယ်။ အခုလိုပြောတော့ မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်သလား? ဆင်ဆာလုပ်ဖို့ ကြံစည်နေပြီလား?အစ်မတို့ ဒီမိုဘလော့တွေက လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့်မပေးတာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ငါ့ဘလော့မှာ.. ငါ့ချမှတ်တဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာဆိုပြီး… အဏာရှင်စိတ်ဓါတ်နဲ့ .. လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာ လူတိုင်းအသိပါ။ အခုဆိုရင် အစ်မတို့ ဒီမိုသမားတွေ . . . . နအဖကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် ပေးဖို့ မပြောရဲတော့ဘူးမဟုတ်လား?
မကြီးမငယ် ရန်ဖြစ်နေသော အဖိုးအဖွားကြီးတွေကို ဟန်ဆောင်မလေးစားတတ်တဲ့
(p.s. ဘာသာရေးစော်ကားတယ်.. ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းလုပ်တယ်. . နအဖလူ စတဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့်… ဦးဏှောက်ကို အနားမပေးလိုက်ပါနဲ့။ Quran ကျမ်းနဲ့ တမန်တော် မိုဟာမက်အကြောင်းကို လေ့လာပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒီမိုဝါဒကိုလည်း စာအုပ်ဖတ်၊ ဒီမိုမီဒီယာတွေ နားထောင်တာထက် .. လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ လေ့လာပါလို့ .. ဆိုဆုံးမလိုပါတယ်)
May 6, 2010 at 2:22 PM Reply
ဆရာတင့် - ဆရာပေးထားတဲ့ link တွေကို သွားတော့ သွားမကြည့်ရသေးဘူး။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်မ မသိဘူး။ ဆရာ ဒီထက်ပိုပြည့်စုံအောင် ပြောပေးရင်တော့ ကောင်းမယ်။"
Link တွေသွားမကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ 
နောက် DVB နဲ့irrawaddy က ဘာသာရေးသတင်းတွေနဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို တိုက်ဆိုင်မကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ပြန်မေးနေလို့ဘာကို ရှင်းပြရမှာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကို မရဘူး ။
ပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကုန်လေ့လာပြီး မကျေနပ်တာကို ပြန်မေးတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ ။ မဟုတ်ရင်တော့ အချိန်ပေးစရာအကြောင်းကို မရှိပါ။ မှတ်ချက်မှာ ပြောချင်တဲ့ မက်ဆေ့က ရှင်းနေတယ် ။ ဘာသာရေးနားမလည်တဲ့ သူမှန်ရင် သူတပါးကို ဘာသာရေးနဲ့ စွပ်စွဲတာ အလွယ်မလုပ်ကြနဲ့။ သူများစွပ်စွဲတာကိုလဲ ကိုက မသေချာရင် ဒါးခုတ်ရာ လက်လျှို ထပ်မဖြန့် နဲ့။ ဒါဘဲလေ။ ဒီမက်ဆေ့က ကိုယ့်အမြင်ဘဲ ။ ဒါကို လက်ခံတာ လက်မခံတာက ပေးထားတဲ့ အထောက်အထားအကုန်လေ့လာပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြ
May 6, 2010 at 2:54 PM Reply
အဲ၏ါက တကယ်လုပ်နေရတဲ့ဆရာတော်တပါး(မစိုးရိမ်စာသင်သား ကလောင်နာမည် ဘွဲ့ မည် ဦးအိန်ဒါစရိယ ) ရဲ့ရှင်းပြချက်
ဟောဒါက အဲလိုလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်လာရတဲ့ ညွှန်ကြားလွှာ ၉၄
ဒီဟာလေးထွက်လာဘို့ ကို သာသနာကာကွယ်လိုတဲ့ရဟန်း ရှင်လူတွေဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အပေါ်မှာ ဆရာတော်ရှင်းပြီးသား
အဲဒါကို နားမလည်ဘဲ ရေးတဲ့သတင်းဋ္ဌာနဆိုတာတွေရေးတာကိုတော့ လင့်မပေးတော့ဘူး ကျက်သရေတုန်းလွန်းလို့ 
May 6, 2010 at 4:35 PM Reply
ကိုဇော်မျိုး - အချင်းချင်းမုန်းအောင် ရန်တိုက်ပေးနေကြသူတွေကို မုန်းရင် ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုအပ်ဘဲ အမုန်းပွားစေတဲ့ သူများဘွဲ့ကို ခွေးချေးကျုံးတဲ့ နေရာမှာ သုံးမယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ပြောဖို့သင့်မသင့် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်မ ဆိုလိုတဲ့ Assault ဆိုတာ ဒီတလုံးတည်းကိုပဲ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကိုဇော်မျိုး ကွေ့ပတ်ပြီး ပြောလိုက်တာက အများကြီးပဲ။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးခွင့်၊ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ သူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေ၊ Assault ဖြစ်စေတာမျိုးကိုတော့ လက်မခံဘူး။ ဒီလို တယောက်ကိုတယောက် စောင်းမြောင်းပြောဆိုပြီး မဆိုင်တာတွေနဲ့ အမှိုက်ပွပြီး ဦးတည်ချက်လွဲသွားတာမျိုး ကျွန်မ လက်မခံနိုင်ဘူး။ စောင်းချင်မြောင်းချင် သရော်ချင်ရင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ချင် တဖက်သတ် စော်ကား ပြောဆိုချင်ရင် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာကိုယ် ပို့စ်တင်ပြီး လုပ်လို့ရတာပဲ။ ဒီမှာ ၀င်ဆွေးနွေးရင်တော့ ယဉ်ကျေးပြီး အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိဖို့ ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ ကျွန်မကို လေးစားပါလို့လည်း ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ တခါမှ မပြောဖူးပါဘူး။ ကျွန်မ ပြောနေတာလည်း ဘာမှ ဟန်ဆောင်ပြီးပြောနေတာ မပါပါဘူး။ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆုံးမနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဆုံးမဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ အသက်၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတွေ အားလုံးဟာ မိမိကိုယ်မိမိ ပဲ့ကိုင်နိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အယူဝါဒ မတူသူတွေကြား အမုန်းမပွါးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုဇော်မျိုး သဘောထားကို ကျွန်မ လေးစားတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း မိမိလက်ခံထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင် ပြုမူကျင့်ကြံဖို့ ကျွန်မအကြံပြုပါတယ်။
ဆရာတင့်- ကျွန်မပြောတဲ့ ဒီထက် ပြည့်စုံအောင် ပေးဖို့ဆိုတာ ဆရာပြောထားတဲ့ DVB နဲ့ ဧရာဝတီကအကြောင်းပါတဲ့ လိပ်စာ အတိအကျ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းအရာကို နည်းနည်း ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဆရာပေးထားတဲ့ Link တွေကို ကျွန်မ ရောက်ပြီးသွားပြီ။ ကျွန်မသိချင်တဲ့ DVB နဲ့ ဧရာဝတတီက အကြောင်း ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့ဘူး။ အဲဒီ Site တွေမှာ သွားရှာဖို့က သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ ဒီလောက်များတာ ကျွန်မ ဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ။ ဆရာနောက်ထပ် ပေးထားတဲ့ link နှစ်ခုမှာ အသံဖိုင်တော့ Download လုပ်မရလို့ နားမထောင်ရပေမဲ့ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ (မြိတ်) ဘလော့ဂ်က ပို့စ်ကိုတော့ ကျွန်မ ဖတ်ပြီးတာ ကြာပြီ။ ဆရာ့ဆီကိုတောင် ကျွန်မ မေးလ်ပို့ထားသေးတယ်။ ထားလိုက်တော့ မရှိရင်လည်း နောက်ကြုံမှပဲ ဖတ်တော့မယ်။ ဆရာစာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 6, 2010 at 4:48 PM Reply
တင့်ဆိုတဲ့ လူကြီးက စာရေးရင် လိုရင်းရောက်အောင် မရေးတတ်လို့ မငယ်နိုင်ရေ။
သူပြောလိုရင်းက ဒီလို ထင်ပါတယ်။
ဆူနာမီ ဘုန်းကြီးတို့ ဦးကောသလ္လတို့ဆိုတာ အဓမ္မ၀ါဒီ ဘုန်းကြီးတွေအဖြစ် သာသနာရေးက သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးတွေကို ဒီဗီဘီ ဧရာဝတီက သာသနာပြုသူရဲကောင်းလို ဘာလို လုပ်ပြီး ရေးထားပုံရပါတယ်။ အဲဒါကို ဒီဆရာက အစာမကြေ ဖြစ်တာနေမှာပါ။ သူပြောတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
အဲဒီဘုန်းကြီး ၂ ပါးက တကယ်ကို အဓမ္မ၀ါဒီဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲလူကြီး(တင့်)က စာရေးရင် သူစိတ်ထဲရှိတာတွေ လျှောက်ရေးနေတာ။ တဖက်လူက ဇစ်မြစ်ကို သိပြီးသားလား မသိသေးဘူးလား ဆိုတာ သူမစဉ်းစားဘူး။ ထားပါတော့ ..။
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေဆိုတာကလဲ ဘာသာရေး အခြေခံက သိပ်ရှိကြပုံ မပေါ်ပါဘူး။ နားမလည်ရင်လဲ နားလည်သူကို မေးမြန်းပြီး သေချာတော့ လေ့လာသင့်တယ်။ သတင်းဌာနတွေ တလွဲလုပ်တာကတော့ အတော်များပါတယ်။ ဘာသာရေးတင် မဟုတ်ပါဘူး နအဖ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်စုရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းတောင် မှားတော့ ကမ်းကုန်နေပြီ။
ဘလော့တွေက နိုင်ငံမကောင်းကြောင်း (တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်သူ နအဖ မကောင်းကြောင်း) ရေးတာ များတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အများစုက မကောင်းတာကို မကောင်းဘူး သိနေကြလို့ပေါ့။ ရုရှားရောက် စစ်သည်ကလေးတွေလဲ နအဖ မကောင်းတာ သိကြပါတယ်။ တချို့ကလဲ သူတို့ အပြင်ရောက်မှ ကိုယ့်အတွင်းရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို မြင်တယ်။ အဲဒါကို ကောင်းပါတယ် မှန်ပါတယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ဖင်ပိတ်ပြီး အော်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ (အကျိုးအမြတ် တခုခု မရှိရင်)
အဲ နအဖ မကောင်းဘူးဆိုတော့ အတိုက်အခံတွေကရော ... ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကျားထက်ဆိုးမယ့် "ရှင်ကြီး"တွေ ချည်းပါပဲ။ သူတို့ အာဏာရရင် နအဖထက် ပိုဆိုးမလားပဲ။ ကြားထဲက ပြည်သူတွေပဲ ဒုက္ခရောက်တာ။ ပြည်ပရောက်ပြီး အကျိုးအမြတ်ခံစားနေသူတွေကတော့ ဒုက္ခမရောက်ဖူးပေါ့။ :)
May 6, 2010 at 5:03 PM Reply
ဒါပေမဲ့ အဲလူကြီး(တင့်)က စာရေးရင် သူစိတ်ထဲရှိတာတွေ လျှောက်ရေးနေတာ။ တဖက်လူက ဇစ်မြစ်ကို သိပြီးသားလား မသိသေးဘူးလား ဆိုတာ သူမစဉ်းစားဘူး။
၀င်ရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးဗျို့ 
ခင်ဗျားလောက်တော့ စိတ်မရှည်တာ အမှန်ဘဲ ။
ကျွန်တော်တောင်သိသေးတဲ့ကိစ္စကို အစကနေ ပြန်ပြန်ရှင်းရမဲ့အလုပ်လောက် ပျင်းတာ မရှိဘူး
May 6, 2010 at 8:51 PM Reply
အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားတဲ့ မိတ်ဆွေရေးတာ အမှန်ဆုံးပါပဲဗျို့။ ပြည်ပသတင်းဌာနကဆိုတဲ့ အကောင်တွေကလည်း လေဖမ်းဒန်းချည်တာ များပါတယ်။ ပြည်တွင်းနအဖ မီဒီယာဆိုတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း ဗြောင်လိမ် ဗြောင်စားချည့်ပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဖာသာ သာ ချင့်ယုံကြတော့။ ပြောတိုင်းယုံရင်တော့ ပုတ်သင်ညိုလို ဖြစ်တော့မှာပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဘာသာတစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အပုပ်ချပြီး အပြန်အလှန်ရေးကြတယ်ဆိုတာလည်း ဘလော့အချင်းချင်းတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်က သက်ဆိုင်၇ာ ဘာသာဝင်တွေပါ ၀င်နွှဲ ၀င်ဆဲကြလို့ စီဘောက်တွေ ကွန်မန့်တွေ ပိတ်ပြီးနေရတဲ့ အခြေဆိုက်ကုန်တယ်။ အပေါ်ကဆရာ ပြောသလိုပဲ။ ခုခေတ်မှာ အကျိုးအမြတ်မရှိရင် ဘယ်သူကမှ ဘာမှ အပင်ပန်းခံလုပ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဗျို့။
May 6, 2010 at 10:28 PM Reply
ဒေါ်လာ has leftanew comment on your post "A one to one patient (or) စပယ်ရှယ်လူနာ တယောက်":
ကျနော် slip ကို အလေးအနက်ပြောချင်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ လူတွေကို အရမ်း အထင်မကြီးပါနဲ့။ အရမ်းလေးလေးစားစား မဆက်ဆံပါနဲ့။ မဗေဒါရဲ့ ပထမ ပိုစ့်
မှာကတည်းက ကျနော် သတိထားနေတာ။ မဗေဒါရဲ့ အထောက်မထားမရှိ ဝါးလုံးသိမ်းပြီး ထင်ရာပြောထားတာတွေကို slip က တစ်ခုချင်း သိက္ခာရှိရှိ အထောက်အထားနဲ့ ရှင်းပြဆွေးနွေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မဗေဒါက တစ်ခုချင်း ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ မူရင်းပိုစ့်ကို ပြန်မကိုးကားနိုင်သလို slip ရဲ့ ကွန်းမန့်တွေကိုလည်း ပြန်မချေပနိုင်ခဲ့ဘူး။ အရှက်မဲ့စွာနဲ့ပဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးနေခဲ့တယ်။ အောက်မှာ ကွန်းမန့်တွေ တစ်ပြုန်ကြီး။ အဲ့ဒီထဲမှာ မငယ်နိုင်က အားပေးအားမြှောက် ရေးထားသေးတယ်။ အဲ့ဒီကတည်းက slip သိသင့်တယ်။ ဒါကို အမှတ်မရှိသေးပဲ မငယ်နိုင်က slip ရဲ့ စီဘောက်စ်မှာ ပြောသွားတဲ့ စကားကို ပြန်ဖြေရှင်းတယ်။ ခုတော့ အမှတ်မရှိတဲ့လူတဲ့ အရှက်မရှိတဲ့လူ နောက်တစ်ယောက် ထပ်တွေ့တာပေါ့။ slip ရေ.. ဒီလူတွေက ဒီလိုဆက်ဆံလို့မရဘူးဆိုတော့ ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ ကောင်းကောင်းသိသွားလောက်ပြီပေါ့။ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူကို အဆင့်အတန်းမရှိသလိုပဲ ဆက်ဆံရတယ်ဗျ။
slip ရဲ့ ကွန်းမန့်တွေမှာ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆီအနှစ်တွေကို တစ်ချက်ချင်းထုတ်ရှင်းတယ်။ slip အောက်မှာ သူတို့ပြန်ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်တွေမှာ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆီအနှစ်ရော slip ရဲ့ ကွန်းမန့် အဆီအနှစ်အကြောင်း တစ်ခုမှ မပါဘူး။
မငယ်နိုင်က မဗေဒါလိုပဲ ရှင်းထားတဲ့ ကွန်းမန့်နဲ့ မူရင်း ဆောင်းပါးနဲ့ မဆိုင်တာတွေကို ပြန်ရေးတယ်။ သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဘယ်တော့မှ သူတို့တာဝန်မယူတတ်ဘူးဆိုတာ ပိုသိလာပါလိမ့်မယ်။ စောင့်ကြည့်ပါ။ နှစ်ယောက်လုံးက ဘယ်တော့မှ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းပြဖို့ သတ္တိလည်းမရှိဘူး၊ အရည်အချင်းလဲ မရှိဘူး။ အရှက်ဆိုတာ လုံးဝပဲ။ မွေးတုန်းက ရှက်ကြောနဲ့ ချက်ကြောနဲ့ မှားဖျက်ခံခဲ့သူတွေ။ ထုံးစံအတိုင်း မယောင်ရာကို ဆီလူးပြီး ပြောချင်တာသာပြောကြပါတော့ဆိုပြီး မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး လမ်းထွက်၊ စီဘောက်တကာ လိုက်အော်နေကြမယ်။ သူတို့အမှားကို လာထောက်ပြတဲ့ ဟာတွေဖျက်မယ်။ အဲ့ဒီဘဝကြီးကို ဆက်ပြီးသာယာနေကြမှာပဲ။ ကျနော်ပြောတာ မယုံရင် စောင့်ကြည့်နေ။
အဲ့ဒီ ပိုစ့်မှာ မငယ်နိုင် ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကွန်းမန့် ၃ ခု ပေးသွားတယ်။ ကျနော့် ပိုစ့်ကို မဖတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောသွားတယ်။ သူ့ဆီမှာကျတော့ ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကွန်းမန့်ပေးလို့ဆိုပြီး ဖျက်ပစ်တယ်။ စီဘောက်က စာတွေကို ဖျက်တယ်။ ဘန်းတယ်။ လုံးဝ အရှက်မရှိဘူး။ ဒါတွေကို slip လည်း မသိပဲမနေပါဘူး။ ဘာကြောင့် အခုလို သူတို့ကို ဆက်ဆံနေလည်းတော့ ကျနော် မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ သူတို့က slip ထက် အသက်အများကြီးကြီးတယ်။ အရှက်တရားနဲ့ တာဝန်ယူမှု နဲနဲမှမရှိကြဘူး။ သူတို့အစား ကျနော် အရမ်းရှက်တယ်။ slip အနေနဲ့ လူတွေကိုအကောင်မမြင်ဖို့နဲ့ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဆက်ပြီး မဆက်ဆံဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
Posted by ဒေါ်လာ to Nge Naing at May 6, 2010 8:49 AM
May 6, 2010 at 10:58 PM Reply
ဟ ဟ။ မငယ်နိုင်လား ဖြေရှင်းမှာ။ သိပ်ပြီး အထင်မကြီးကြနဲ့ဗျို့။ အဖျက်မခံရကံကောင်း။ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးရယ်။
ပထမ မငယ်နိုင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်တယ်။ စဉ်းစားစရာလေးတွေ ပေါ်လာတယ်။
ဒုတိယ slip ပေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်ကို ဖတ်လိုက်တယ်။ မဆိုးဘူး။ တစ်ဖက်ကတော့မှန်နေပြီ လို့ သုံးသပ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ထားလဲ သိချင်လာလို့ သူ့အောက်က မငယ်နိုင်ရဲ့ ကွန်းမန့်ကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်လိုက်တယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ အနှစ်သာရတွေရော။ ကွန်းမန့်ရဲ့ အနှစ်သာရတွေပါ အကုန်ပျောက်တာပဲ။ ဟာ ဟ။ ဆောင်းပါးက အနှစ်သာရတစ်ချက်မှမပါသလို ဖြေရှင်းထားတဲ့ ကွန်းမန့်ရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုမှမပါဘူး။ သူပြောချင်တာ ပြောသွားတာ။ (((ဒီမှတ်ချက်ကို ဒေါ်လာက ၆ ကြိမ်တိတိ လာထည့်သွားပါတယ် - Nge Naing။)))
Nge Naing has leftanew comment on your post "A one to one patient (or) စပယ်ရှယ်လူနာ တယောက်":
ကျွန်မလား.........ေ-ာက်ရှက်မရှိတဲ့ ဖာသည်မကြီးပါ
(((ဒီမှတ်ချက် ကိုတော့ မှတ်ချက် အဖျက်ခံရတာကို စိတ်တိုလို့ ဖြစ်ပုံရတယ် ကျွန်မနာမည် အသုံးပြုပြီး ဒေါ်လာက နှစ်ကြိမ်လာထည့်သွားတယ် - Nge Naing)))
Posted by Nge Naing to Nge Naing at May 6, 2010 7:56 AM
အပေါ်ဆုံး မှတ်ချက်ကို ဒေါ်လာက ခုနှစ်ကြိမ်တိတိ လာထည့်သွားပါတယ်။ အမှန်က ကျွန်မနာမည်သုံးပြီး စိတ်တိုပြီး ရေးထားတဲ့ တခုကလွဲရင် ကျန်တဲ့ Slip ကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ နှစ်ခုကို ဖျက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဖျက်ရတာကတော့ ကျွန်မကို တမင်စိတ်တိုအောင် ဆွပေးနေတာသိလို့ ဟာသပြန်လုပ်ပြီး သူ့ကို ပြန်ဆွပေးချင်လို့၊ ကျွန်မက သူဒီလို ကျွန်မကို ဒုက္ခရောက်အောင် ဆိုပြီး အကုသိုလ်တနင့်တပိုးနဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ထည့်နေတာကို ဟာသတခုအနေနဲ့ မြင်ယောင်ပြီး ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်မက ဟာသအဖြစ်မြင်ပေမဲ့ ဒေါ်လာက ဒီစာတွေကို ရေးဖို့ အချိန်ပေးရတယ်။ ရေးထားချက်အရ စာကို တကယ်ဖတ်ခဲ့တယ်၊ သူ Slip ကို ဒါတွေ တကယ်သိစေချင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သိသာတဲ့အတွက် ဒီအချက်တွေကို ငှဲ့ပြီး မှတ်ချက်တွေကို ကျွန်မ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ - အဲဒီလို သူများကို စိတ်အနှောင့်အယှက် လိုက်ပေးတာ မိမိပဲ အကုသိုလ်စိတ်တွေရပြီး အသက်တိုယ်ဆိုတာ နားလည်သင့်ပါပြီ။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့အတွက် နောက်ထပ် မနှောင့်ယှက်ဖို့ စေတနာနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
May 6, 2010 at 11:12 PM Reply
ဆရာဇော်မျိုးက ကျေးစေတမန်ဘလော့ မှာ comment တွေကို အမြဲ ရေးနေတဲ့သူပါ၊ သူက အမှန်ပြောရင်းနဲ. အသုံးအနှုန်းတော့ နည်းနည်း ကြမ်းချင်ကြမ်းသွားမယ် ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ကတော့ သူ.ရဲ. comments တွေကို ကြိုက်ပြီး အစဉ်အမြဲ ထောက်ခံနေပါ့မယ်၊ အားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ ၊
May 7, 2010 at 12:13 AM Reply
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျနော့်ကွန်းမန့်ကို ပိုစ့်တစ်ခုအနေနဲ့ အလေးအနက်ထားတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစ်မရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြန်ဆွေးနွေးချက်ကို ကျနော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။
ပထမစာပိုဒ်မှာ ကျနော့်ဘလော့ကို ရောက်ရှိလာပုံကို စာကြောင်း ၇ ကြောင်းနဲ့ စာတစ်ပိုဒ်အပြည့်ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ ကျနော် ဘာပြန်ပြောရမှန်းလည်း မသိပါဘူး။
ဒုတိယ စာပိုဒ်မှာ အစ်မရေးခဲ့တဲ့ စာကို အစ်မ ရှင်းထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အစ်မရေးထားတာက
**Slip ရဲ့ C-Box မှာ ကျွန်မ သွားရေးတဲ့ ဟစ်တိုင်က တင်ထားတဲ့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်" ဆိုတာက ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ ဒီထဲမှာ ရေးထားတာတွေကို ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်တယ် မဟုတ်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်လည် တုံ့ပြန်စေချင်တဲ့ သဘောပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်မက အပြည့်အ၀ ယုံလို့ Slip ကိုထောက်ပြတယ်လို့ Slip က ထင်တယ်။ ကျွန်မက ယုံကြည် မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်လည်း တခုမှ ပြောထားတာ မပါပါဘူး။**
အစ်မ ရေးခဲ့တာက ကို ကျနော် ပိုင်းပြပါမယ်။
(က) "ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်"
(ခ) "ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်တယ် "
(ဂ) "မဟုတ်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်လည် တုံ့ပြန်စေချင်တဲ့ သဘောပဲ ရှိပါတယ်။"
အစ်မရေးခဲ့တာက အဲ့လိုပါ။ ကောင်းပြီ။ (က) နဲ့ (ခ) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် တူတယ်လို့ အစ်မ ထင်လား??။ အစ်မက ကျနော့်ထက် အသက်လည်း အများကြီးကြီးပါတယ်။ အစ်မ ပိုသိမှာပါ။ ဥပမာ
(က) 2012 မှာ Nibiru ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မယ်
(ခ) 2012 မှာ Nibiru ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်နိုင်တယ်
ဆိုတဲ့ နှစ်ခု အဓိပ္ပါယ် တူလား ??
မတူဘူးဆိုတာ အစ်မသိပါတယ်။ သိလို့လဲ ကျနော့်ဆီမှာတုန်းက လိမ့်မယ် နဲ့ သုံးခဲ့ပြီး ခု အစ်မဘလော့မှာ ပြန်ဖြေရှင်းတော့ နိုင်မယ် ဖြစ်သွားတာပါ။ အစ်မသုံးခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုံးကြောင့် ကျနော်အစ်မကို ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ (ဂ) မှာ တုန့်ပြန်စေချင်တယ်လို့ ရေးထားတော့ ကျနော် အစ်မဆီမှာ လာဖြေရှင်းပြတာပါ။
**ကျန်တာဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်မက အပြည့်အ၀ ယုံလို့ Slip ကိုထောက်ပြတယ်လို့ Slip က ထင်တယ်။ **
လို့ အစ်မက ပြန်ရေးထားတယ်။ ကျနော် ထင်တာ အစ်မရဲ့ စကားအသုံးအနှုံးကြောင့်ဆိုတာ ကျနော် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အစ်မ မသိလို့ သုံးခဲ့တာမဟုတ်ပဲ သိသိနဲ့ သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ ကျနော် ပြောခဲ့ပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ အစ်မ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ စကားအထားအသိုက အဓိပ္ပါယ် အများကြီးပြောင်းစေပါတယ်။ ဥပမာ
(က) Pardon impossible , to be sent to Siberia .
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် မဖြစ်နိုင် ၊ ဆိုက်ဗေးရီးယား သို. ပို.ရန် ။
(ခ) Pardon , Impossible to be sent to Siberia.
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးပါ ။ ဆိုက်ဗေးရီးယားသို. ပို.ရန် မဖြစ်နိုင် ။
ကော်မာ တစ်ခု နေရာအထားမှားလို့ အဓိပ္ပါယ်ချင်း ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် အစ်မ သတိထားနိုင်အောင်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် အစ်မပြောတာကို အားလုံးက အစ်မမြင်စေချင်တဲ့အတိုင်း မြင်နိုင်မှာပါ။
May 7, 2010 at 12:18 AM Reply
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ကြိမ် ကျနော်တို့ စကားတစ်ခွန်းမှားယွင့်မှုကြောင့် ဆွေးနွေးခြင်းတစ်ခု ဖြစ်မလာတော့ဘူးလို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစ်မရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆွေးနွေးချက်မှာ
မူရင်းဆောင်းပါးကို ကိုးကားထားတာ တစ်ခုမှတော့ ကျနော် မတွေ့မိဘူး။ ပြီးတော့ မူရင်းဆောင်းပါးကို ကျနော် သာဓကပြပြီး ဆွေးနွေးထားတဲ့ အဆီအနှစ်အားလုံးကို ရှောင်ပြီး ကျန်တဲ့ စာကြောင်းတွေကို အစ်မ အပြာရောင်ချယ်ထားတာ ကျနော် တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆက်ဆွေးနွေးနေရင်လည်း မယောင်ရာ ဆီလူးသလိုပဲ ဖြစ်နေတော့မယ်။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စကို ကျနော် ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။
ကျနော်သတိထားမိတာတစ်ခုက အခု အစ်မဖြစ်နေတာက ဒေါ်လာနဲ့ ဒေါ်လာရေးတဲ့စာတွေကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာပါ။ အမှန်တော့ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးနေတာ သူရေးတဲ့စာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်မ ပေးခဲ့တဲ့ လင့်က စာကိုပါ။ သူ့ဆီမှာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်ညွန်းထားတာပဲ ရှိတာပါ။ ဒါပေမယ့် အစ်မက နောက်ဆက်တွဲပြန်ဆွေးနွေးချက် ဆိုပြီး ကိုဒေါ်လာ နဲ့ ကိုဒေါ်လာရေးထားတာတွေကို မကျေနပ်တာ များနေတယ်။ မနေ့ကလည်း ကျနော့် အီးမေးထဲကို ကိုဒေါ်လာ မေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ "မူရင်ဆောင်းပါးကိုဖတ်မိလို့ စဉ်းစားစရာတွေ သူတွေ့ရကြောင်း။ ကျနော့် ရဲ့ ကွန်းမန့်တွေကိုတွေ့တော့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာပြီး အစ်မရဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်လိုက်တော့ မူရင်းပိုစ့်နဲ့ဆိုင်တာလဲ မတွေ့ရကြောင်း၊ ကျနော် ပြန်ရှင်းထားတဲ့ မူရင်းပို့ပါအချက်တွေလဲ ဘာတစ်ခုမှမပါကြောင်း၊ အစ်မနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကို respect ပေးပြီး မဆက်ဆံသင့်ကြောင်း...." ပို့ထားပါတယ်။ ကွန်းမန့်ကိစ္စတွေ ဘာတွေပါပါသေးတယ်။ ကျနော် မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်မတို့ နှစ်ယောက် ပဠိပက္ခ ကို ကျနော် ဝင်မပါချင်လို့ ဘာမှ reply မပြန်ခဲ့ပါဘူး။ အစ်မတို့နှစ်ယောက်ကြား ပြဿနာတွေ ရှိကောင်းရှိပါမယ်။ ကျနော်ကြားမညပ်ချင်ဘူး။ ခုတောင် ကျနော့် ကွန်းမန့်က သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတွေ များနေလို့။ အစ်မတို့ကိစ္စအစ်မတို့ ဆက်ရှင်းကြပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ ရောလာလို့ ကျနော် ဆွေးနွေးထားတာတွေလည်း တန်ဖိုးကျပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်တွေလည်း ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ ကျနော်အခန်းက ဒီမှာပြီးပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်ကို respect ပေးထားတာတွေ တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 7, 2010 at 12:41 AM Reply
'ဒီပို့စ်က ကျွန်မအာဘော်မဟုတ် ကျွန်မယုံကြည်လက်ခံလို့ ပြန်လည် ကူးယူဖေါ်ပြထားတဲ့ ပို့စ်လည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်တခုလုံးကို တုံ့ပြန်ပြီး Slip မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအကုန်လုံးကို ကျွန်မ ဖြေစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး" အဲဒီတော့ မငယ်နိုင်က မငယ်နိုင်ရဲ့ အာဘော်လည်း မဟုတ်ဘူး~~ မငယ်နိုင် ယုံကြည်လက်ခံလို့ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြထားခြင်း မဟုတ်တဲ့ ပို့စ် တစ်ခုကို ဘာလို့ တကူးတက ကြီး ပြန်လည် ဖော်ပြထားတာလဲ??? ဘာအတွက်ကြောင့် ဒီပို့စ်ကို မငယ်နိုင် ဆီမှာ တင်ထား၇တာလဲ??? မငယ်နိုင်က တကယ်ဆို ဒီဘလော့်ကြီးရဲ့ အက်ဒမင် တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ....ဒီဘလော့်မှာ တင်သမျှပို့စ်အားလုံး မငယ်နိုင် တာဝန်ယူနိုင်ရပါမယ်...မငယ်နိုင်တုံ့ပြန်သလို အဲဒါ ကျွန်မ အာဘော် မဟုတ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီး မငယ်နိုင်မှာ လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်....လုပ်လည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး....အဲလို မယုံကြည်ရင် မငယ်နိုင် အာဘော်မဟုတ်ရင် အကောင်းဆုံးကတော့ မတင်ပါနဲ့~~ ဒါမငယ်နိုင်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
နောက်ပြီး ကိုဇော်မျိုး Comment ကို ပြန်လည် တုံ့ပြန်ထားတဲ့ အတွက် ကျနော် မငယ်နိုင်ကို လေးစားပါတယ်။ ဒါတုံ့ပြန်သင့်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုပါ။
May 7, 2010 at 1:01 AM Reply
အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ကျောင်းစရိတ်အပြင် ဒေါ်လာ၅၀အပိုဝင်ငွေရတော့ ပိုသုံးလို့ရတာကိုပြောနေတာဖြစ်မှာပါ
May 7, 2010 at 1:08 AM Reply
ဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သခင်မျိုးဟေ့ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ထားတဲ့လူအတွက်ပါ................
လူဆိုတာ ကာလံ ဒေသံ ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်ရပါတယ်....အခု ခင်ဗျားအော်နေတဲ့ သခင်မျိုးဟေ့ သခင်မျိုးဟေ့ ဆိုတာ ၁၉ ရာစုလောက်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ....တကယ်လို့ ခင်ဗျားမသိသေးဘူးဆိုရင် ဒါ ၂၁ ရာစုပါ......
နောက်ပြီး တိုင်းတပါး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး...... ခင်ဗျားလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုတာ လူတိုင်း ကလေး ဘဝတည်းက ပြောတတ်ကြပါတယ်....ပွင့်လင်းတာကို Price တစ်ခုထင်ပြီး ရူးသွပ်မနေပါနဲ့ဗျာ....ခင်ဗျားပွင့်လင်းမှုကြီးက တစ်မျိုးကြီးပဲ....ခင်ဗျားကို ခင်ဗျား နှလုံးရည်မရှိဘူးဆိုပြီး ဝင်ခံနေသလိုကြီးပဲဗျ.
တကယ်လို့ ခင်ဗျားမှာသာ နှလုံးရည် ချို့တဲ့နေရင် ဒီလောကထဲ ဝင်မလာပါနဲ့... ၂၁ ရာစုဆိုတာ နှလုံးရည်ကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနေတဲ့ ခေတ်ပါ....
နောက်တခုက ခင်ဗျားကြီးကြည့်ရတာ တော်တော်ခနဲ့ချင်တဲ့ပုံပဲဗျာ.... ခနဲတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားကြီးတို့လို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအလုပ်လား??ေ-ာက်ရမ်း ခနဲ့ချင်ရင်တော့ ပုဆိုးဝတ်မနေပါနဲ့ ကိုဇော်မျိုးရေ.... ဟုတ်ပီလား.....(တော်ကြာ ပုဆိုးဝတ်တာ မဟုတ်ဘူး ဘောင်းဘီဝတ်တာဆိုပြီး ခနဲ့နေအုံးမယ်)~~~~~~~~~~~
နောက်ပြီးသခင်မျိုးကြီးက ထမီဝတ်ထားတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်က ပြောနေတာတောင် ခနဲ့နေတုန်းပဲနော်........သခင်မျိုးကြီးက~~
သခင်မျိုးကြီးအရည်အချင်းက ပွင့်လင်းတာနဲ့ ခနဲ့တာပဲလား????
May 7, 2010 at 1:56 AM Reply
ကျောင်းစရိတ် ၅၀ ဘာညာဆိုတာ ဘားမားတူဒေးက ရွှီးထားတဲ့ ရွှီးလုံးပါဗျာ။
ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်လင့်ခ်ပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပဲ ပို့ကြည့်ပါဦး။ သဒ္ဒါနဲ့ စာလုံးပေါင်းပဲ စစ်လိုက်။ ဆယ်မှတ် ရရင် ကံကောင်း။ အဲဒါကို အဆင့်အတန်း တစ်ခုပေးပြီး ဆွေးနွေးနေကြတာကို မှားတယ်လို့ မြင်တယ်...
May 7, 2010 at 4:58 AM Reply
မငယ်နိုင်နဲ့ အလှတရား တို့ phoe တို့ အပါအဝင် အခြား မသိသေးသူများရေ... အဲ့ဒီ ကျောင်းလခ ဒေါ်လာ ၅၀ ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ်ရင်း ရုရှားကစစ်ဗိုလ်တွေက တစ်ခွိခွိရယ်နေကြမှာဗျ သိလား။ သူတို့တွေ ကျောင်းသွားတက်တာ နိုင်ငံတော်ကလွှတ်တဲ့ ပညာတော်သင်နော်...။ သူတို့မပြောနဲ့ တစ်ခြား ကိုရီးယားတို့ တရုတ်တို့ကို လွှတ်တဲ့ အစိုးရ ပညာတော်သင်တွေတောင် ကျောင်းလခ ကိစ္စဘာမှမလုပ်ရဘူး။ slip က အလိမ္မာသုံးပြီး သာသာလေး နှပ်သွားတာ။ အရင်လူတွေက ဘုမသိဘမသိခံပြီးတဲ့အပြင် ခု နောက်လူတွေကပါ ကွန်မန်း ထပ်ပေးနေကြတယ်။ ဟား ဟား။ ဘာမှလေ့လာမှုလည်း မရှိကြဘူး။ ပိန်းလိုက်ကြတာကမ်းကုန်။ ဒါကြောင့်လည်း ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေ ကောင်းကောင်းကြီး လှိမ့်လှိမ့်ကစ်နေကြတာ။ ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ ခံပေအုံးတော့ဗျို့။
May 7, 2010 at 5:40 AM Reply
ပို့စ်နဲ့ ရော အပေါ်က ကွန်မင့်နဲ့ရောသက်ဆိုင်တယ်ထင်လို့ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါတယ်။
ရုရှမှာ ပညာတော်သင်နေကြတာဟာ စစ်ဖက်က အရာရှိငယ်များ နဲ့ သပန က ၀န်ထမ်းဆရာလေးများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျုပ်လက်လမ်းမှီသလောက်၊ ရုရှမှာပညာသင်ခဲ့ကြဖူးတဲ့ညီလို၊ သူငယ်ချင်းလိုရင်းသူများဆီကတော့ ဘလော့ရေးခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၅၀ပိုရတယ်လို့တော့ မကြားဖူးပါ။
သူတို့တတွေရုရှမှာ ပညာဘယ်လိုသင်ကြတယ်ဆိုတာတော့ သူတို့သာလျှင်အသိဆုံးမို့အထူးတလည်ဖြည့်စွက်မပြောလိုပါ။
တာဝန်အရကျောင်းတက်ကြသူများရှိသလို တကယ်ပဲ ပညာလိုလိုလားလားသင်ဖို့ကြိုးစားကြသူများလဲ နည်းပေမယ့် ရှိပါတယ် (ဒါကတော့ဘယ်ကျောင်းသားမဆို သဘာဝပါ)။
အပေါ်တစ်ယောက်ပြောသွားတာတော့ သိပ်မရှင်းလှဘူး။ ကျုပ်သိသလောက်ပြောရရင် ပညာတော်သင်လွှတ်တဲ့အထဲမှာ ရုရှသွားရသူတွေကိုပဲ နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲပြီး ပညာသင်ခိုင်းရတာပါ။ ကျန်တဲ့ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အစ္စရေး စတဲ့ နိုင်ငံအများစုကတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက စားရိတ်အကုန်ကျခံပြီး စကောလားရှစ်နဲ့သွားရတာပါ။ မြန်မာအစိုးရဟာ ထို စကောလားရှစ်ကိုပင် သူတို့အိပ်ထဲက စိုက်ပေးထားရတဲ့အလား ၀န်ထမ်းများကိုချုပ်ကိုင်ဖို့ incentive တစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားကိုင်တွယ်ပါတယ်။ အချို့သောဝန်ထမ်းများကလဲ ပညာသင်စားရိတ်ပေးတဲ့ မူလနိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်တာထက် သူတို့အဘ (၀န်ကြီးစတဲ့အထက်လူကြီး)များကို ကျေးဇူးရှင်ကြီးများသဖွယ်ထင်မှတ်မှားတတ်ကြပါတယ်။
ပြောစရာတွေရှိနေသေးပေမယ့် အများကြီးမပြောလိုတော့ပါ။ ဆိုလိုရင်းကတော့ တိုင်းပြည်အိပ်ထဲက စိုက်ထုတ်ပြီးပညာသင်နေကြတဲ့ စစ်ဖက်၊နယ်ဖက်က ပညာတော်သင်များအနေနဲ့ မိမိပညာကိုသာ အထူးအာရုံစိုက်သင်ကြားစေလိုပါတယ်။ မတရားတဲ့ စနစ်ဆိုးနဲ့ လူမုန်းများတဲ့ အုပ်ချုပ်သူများအတွက် မိမိရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ပညာသင်အချိန်များ မပြုန်းတီးပါစေနဲ့။ နိုင်ငံရေးစနစ်တခုကောင်းမကောင်းဟာ မိမိရောက်ရှိနေရာ နိုင်ငံကိုမောင်းနှင်နေတဲ့ စံနစ်တခုနဲ့ချိန်ထိုးလေ့လာလျှင်ပင် ကောင်းစွာနားလည်နိုင်သလို၊ အားလပ်ချိန် ကမ္ဘာ့ရေးရာသတင်းများလေ့လာချင်းဖြင့် မိမိအမြင်ကို ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါတယ်။ ၀ါသနာအရသော်လည်းကောင်း၊ အပျင်းပြေသော်လည်းကောင်း ဘလော့လည်ဖတ်ရှုကြတာ ပြသနာမရှိပေမယ့်၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ကိုအခြေခံကာ သူပါးရိုက်ရင် ငါတို့နားကိုက်မဟဲ့ဆိုတဲ့အမြင်များနဲ့ ဘလော့သူရဲများလုပ်ကာ အပြန်လှန်စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ ဥခွံထဲကမထွက်နိုင်ရင်တော့ မိမိရည်ရွယ်ရင်း အသိအမြင်တိုးပွားဖို့ ဆိုတဲ့အရာမှ သွေဖီကာ၊ ပညာလဲဟုတ်တိပတ်တိမတတ်၊ ရန်သူလဲပွား၊ အချိန်ကုန် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကုန်တာသာအဖတ်တင်မယ့် အခြေအနေမျိုးကို ဆိုက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ရင်းခံနဲ့ သတိပေးပါရစေ။
အကြံပက်စက်တဲ့ အတိုက်အခံဒီမိုတွေပါ။ ဒီဆောင်းပါးက တော့ ဘားများတူဒေးက တင်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက အဲဒီလို ပြောတယ်တဲ့ သူတို့က အဲဒီလိုဆောင်းပါးမျိုး ရေးလိုက်လို့ ရုရှားက ကောင်တွေက ဒေါသတွေထွက်ပြီး အဲဒီဘုန်းကြီးကို ၀ိုင်းဆဲကြမယ်လို့ တွက်ထားတာ အဲဒီတော့ ရုရှားက ကောင်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ငြိ ဒါက သူတို့ဆင်ထားတဲ့ အကွက်။ အမှန်မှာက ရုရှားက ကောင်တွေက ကောင်းတာလည်းရှိတယ် မကောင်းတာလည်းရှိတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေတာပဲ များတယ် နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ ၀င်ရေးတာတို့ ဆွေးနွေးတာတို့ဆို အရင်ကဆို တော်တော်ကို နည်းပါသေးတယ်။ ဒီမိုနဲ့ပဲ ဒီမိုအမည်ခံ ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံတွေကတော့ ရုရှားကကောင်တွေကို မထိတထိ ဆွဆွပြီး နိုင်ငံရေးမှာ ၀င်ပြီးရေးအောင် လုပ်တာပါ။
နောက်တစ်ခု ငယ်နိုင်ရေ ဒေါ်လာရမရတော့ မသိဘူး ဟိုတလောကတောင် နစ်နေမန်းနဲ့ အာဇာနည်တို့က ဝေစုမတည့်လို့ စားခွက်လုကြတာ မှတ်မိပါသေးတယ်ဗျား မိုးသီးဇွန်တို့ဆိုလည်း ဘလော့လေးရေးပြီး အမေရိကန်မှာ ဘောကျော့နေတာ နောက်အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် အခုဆို နောက်ထပ် ဒေါ်လာ 36 သန်းတောင် ထောက်ပံ့ပေးဦးမှာဆိုတော့ သူ့ထက်ငါ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် ပိုစ့်တွေ အပြိုင်တင်ကြနဲ့ ဒါလား နိုင်ငံကို ချစ်တယ်ဆိုတာ။
ပြီးတော့ သင်္ကြန်တွင်းမှာ လုပ်တဲ့ ဘူးသံချပ် ဘာညာဆိုတာကလည်း ၀င်ပြိုင်ရင်ကို ဒေါ်လာ 1000 ပေးတယ်ဆိုတော့ ၀င်ပြိုင်ကြတာတဲ့ ဘယ်မှာလဲ ခံယူချက်။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူတွေက ဒေါ်လာတွေရပါသလဲဆိုတာ သိပါတယ်။
ပြောတော့ စစ်အစိုးရကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်နဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မစည်းလုံး။ ဒီကြားထဲ အဝေးရောက် ၀န်ချီးချူပ်ဆိုသူကလည်း ဘယ်ပျောက်လို့ ရောက်နေမှန်းမသိ။
May 7, 2010 at 9:37 AM Reply
May 7, 2010 at 9:39 AM Reply
ခုတလော ma Nge Naing ကိုနေရာတကာတွေ့နေရတယ်။
ဘလော့ကစာမျက်နှာမှာရေးထားတာက *အမိ မြန်မာပြည်*
အားတကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာ တိုးတက်စေချင်ပါသည် တဲ့
blog icon ကြီးမှာက australia flag ကြီးက ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားကြီးနဲ့လွင့်နေလိုက်တာများ
http://dollardollardollardollardollar.blogspot.com/2010/03/blog-post_26.html မှာ လာပေးထားတာလေးပါ သက်ဆိုင်တဲ့သူဆီ ပြန်ပို့ပါတယ်။ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်။
Australia အလံက သုံးခုတောင်ဗျ။
(၁) Phone Free ခေါ်လိုရရတဲ့ နိင်ငံတွေထဲက ရှေ့ဆုံးမှာ တစ်ခု၊
(၂) farvicon မှာလည်း Australia အလံပဲ၊
(၃) cursor မှာလည်း Australia အလံပဲဗျ။
ဒီဘလော့မျိုးတော့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ တကယ်ဗျ။ လုပ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ အတွေးတောတာတွေ၊ ရေးထားတာတွေက မူလတန်းကလေး ဦးနောက်၊ သတ်ပုံက မူလတန်းကလေးသတ်ပုံ၊ အသက်က သေခါနီးနေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့တူတာတော့ တစ်ခုမှမရှိဘူး။ ပြောလိုက်ရင်တော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်။
စီဘောက်တကာရောက်တာတော့ မပြောနဲ့ဗျို့ မဗေဒါပြီးရင် သူပဲ။ အအားဆုံး ဘလော့ဂါဆုပေးရမယ်ဗျ။
May 7, 2010 at 9:46 AM Reply
ဆရာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လေးစားသမှုနဲ့အများက ခေါ်တဲ့ ဆရာမျိုးကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဘယ်သူကမှ မခေါ်ပါပဲ ဆရာရူးရူးပြီး ကိုယ့်နာမည်ရှေ့ ကိုယ်ပြန် ဆရာထည့်ပြီး ဆရာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုမူနေသူတွေကလည်း ရှိသေး။ အဲဒါကြောင့်လည်း နအဖ အစိုးရ တောသူတောင်သား အညာဘက်ကဟာတွေကို စစ်ဖိနပ်အောက်ထဲထည့်ပြီး နင်းချင်သလိုနင်းနေတာ။ နည်းတောင်နည်းသေး ဟားဟား။
May 7, 2010 at 11:11 AM Reply
ဒီပို့စ်ကို လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားသူတွေအထဲမှာ Jalann, စိန်အောင်မင်း အပါအ၀င် တချို့တွေက ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အားလုံးကို ကျွန်မ ရှင်းအောင် ပြောပြချင်တာက ဒီပို့စ်ဟာ ကျွန်မရဲ့ လူနာတယောက်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ပို့စ်အောက်ကနေပြီး Slip ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကူးယူလာပြီး ပို့စ်တခု လုပ်ထားပေးတာ သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတာ တခြားစာဖတ်သူတွေ သိအောင် Slip ရေးတဲ့ မှတ်ချက်ရဲ့ မူရင်းပို့စ်ကို ညွန်းထားပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီပို့စ်ကို ကျွန်မ ပြန်ဖေါ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်က ဟိုပို့စ်ထဲမှာ မဆိုင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ဖေါင်းပွနေတာမျိုးကို မလိုချင်လို့ Slip အပါအ၀င် ဆက်ဆွေးနွေးချင်သူများ ဒီထဲမှာ ဆွေးနွေးလို့ရအောင်၊ နောက်တခုက ကျွန်မဆိုလိုတာကို Slip မရှင်းသေးတာကိုလည်း ဖြည့်စွက်ပြီး ထပ်ရှင်းပြလို့ရအောင် ဒီနှစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို ကျွန်မက မူရင်းပို့စ်ကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားတယ်လို့ Jalann က ဆက်ပြီး ထင်နေတယ်။ Jalann က အရင်ပို့စ်တုန်းကလည်း မှတ်ချက်တခုကို ဖတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ ဆိုပြီး ပို့စ်ကို သေသေချာချာမဖတ်ဘဲ မေးခဲ့တာ ရှိသလို ဒီတခါလည်း ပို့်စ်ကိုသေသေချာချာ မဖတ်ဘဲနဲ့ မှတ်ချက်ပေးထားတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ မှတ်ချက်ရေးရင်တော့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တခုကို တုံ့ပြန်ရေးရင်တောင်မှ ပို့စ်မှာ ဘာရေးထားလို့ ဒီမှတ်ချက် ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာ သိအောင်တော့ ပို့စ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှ ပေးဖို့ Jalann ကို ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မက ပွဲတင်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Slip ဆန္ဒတွေကို ဖေါ်ထုတ်ထားတဲ့ Slip မှတ်ချက်တွေကို စေတနာနဲ့ ပြန်တင်ပေးတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Jalann နဲ့ စိန်အောင်မင်း ရှင်းလောက်ပြီထင်တယ်။
Slip ကိုထပ်ပြောစရာ ရှိတာက ကျွန်မက Slip ကို ဒီပို့စ်အကြောင်း ညွန်းပဲညွန်းပေးတယ် မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာ ပြောထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မကို Slip ပြောထားတာကို ပြန်ရှင်းဖို့ မလိုအပ်လို့ မရှင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ လက်ခံတယ်လို့ ထင်သွားတာ Slip ပြောသလိုပဲ ကျွန်မစကားလုံး အသုံးအနှုံးတွေကြောင့် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထားလိုက်တော့။ အခု ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မသဘောထားကို သိပြီဆိုရင် အခုဒီမှတ်ချက်တွေကို သီးသန့် ပြန်တင်တဲ့ ပို့စ်ဟာ ကျွန်မအတွက် ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မရှိဘူး Slip တို့အတွက် ဆွေးနွေးခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ ယုံကြည်လလ်ခံလို့ ပြန်ဖေါ်ပြထားတာ မဟုတ် Slip ကို ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေတဦး အဖြစ်နဲ့ သွားဖတ်ကြည့်ဖို့ ညွန်းပေးတဲ့ သဘောသာ Link ပေးခဲ့တာ ဖြစ်လို့ အဲဒီအကြောင်း Slip ပြောတဲ့ အချက်တွေ အကုန်လုံးကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ ကျွန်မမှာ တာဝန်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မ လက်ခံယုံကြည်လို့ ပြန်ဖေါ်ပြထားတဲ့ မောင်စွမ်းရည် ရေးတဲ့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က တင်တဲ့ "ဘယ်လဲဘာလဲ မြန်မာပြည် ရွေးကောက်ပွဲ" ပို့စ်မှာ လာသမျှ မှတ်ချက်တွေကို ကျွန်မ ဘယ်လိုဒိုင်ခံ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သွားလေ့လာကြည့်စေချင်တယ်။
May 7, 2010 at 11:55 AM Reply
မှတ်ချက်ပေးသွားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂျစ်တူးမဟုတ်တဲ့ Anonymous နှစ်ယောက် Kokoson, Phoe, အလှတရား၊ Nanda, Bluebird ဒေါ်လာနဲ့ ဂျစ်တူးတို့မှတ်ချက်တွေကိုလည်း ကျွန်မ ကောင်းကောင်းဖတ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။ အမြင်မတူတာကို ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေးကြတာကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ဒေါ်လာရေ C-Box တွေမှာ ရေးထားတာ Nge Naing တွေအားလုံးက ကျွန်မမဟုတ်ဘူး။ Feedjit live ကို ပြန်ကြည့်တော့ တချို့ C-Box တွေကတဆင့် လာလည်တဲ့ Link တွေကို လိုက်ကြည့်တော့ ကျွန်မနာမည်နဲ့ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း (သို့) အရေမရ အဖတ်မရတွေ ရေးထားတဲ့ C -Box တချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ဘာမှမရှင်းတော့ဘူး လက်ညောင်းရင် နားသွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိတောက်မြေမှာတော့ အောက်က Nge Naing တွေက ကျွန်မမဟုတ်ဘူး လို့ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ တခြား မှာတော့ ကိုယ်တခွန်းရေးရင် အခွန်းတရာလောက် ဆက်တက်လာမှာ စိုးလို့ မရေးခဲ့ဘူး။ အဲဒါကို လိုက်လုပ်နေတာ ဒေါ်လာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒေါ်လာရေ မကောင်းမြင်ဝါဒ သိပ်ထားနဲ့ အကုသိုလ်များပြီး အသက်တိုတယ်၊ လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် သတိလေးနည်းနည်း ယှဉ်ပြီးနေသင့်တယ်။
ဂျစ်တူးက ကျွန်မက Tint ကို ဆရာခေါ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မ တောသူတော့ တောသူပဲ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူ Tint ကို ဆရာခေါ်တာက တောသူဖြစ်လို့ ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူက Public Health in Myanmar မှာ ကျွန်မနဲ့ စာရေးဖေါ် ဒေါက်တာတင့်ပါ အဲဒါကြောင့် သူ့ကိုဆရာခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောတာကို ကျွန်မ မရှင်းတာကတော့ ကျွန်မထင်တယ် ဆရာဝန်တွေက Biomedical Science နဲ့ဆိုင်တဲ့ Diagnosis Study တွေ ဆေးအကြောင်း၊ ရောဂါတွေ အကြောင်းတွေနဲ့ပဲ အချိန်ပေးရများတော့ တခြားရှင်းပြနိုင်တဲ့အားနည်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာတင့် ပြောတာကို Clarify လုပ်ပေးတဲ့ Anonymous ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဆရာတင့်ပြောသလိုပဲ နားဝေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့လောက်မှ ဘာသာရေး မလိုက်စားတာ သူသိသလောက်တော့ ဘယ်သိနိုင်မလဲ။
May 7, 2010 at 2:32 PM Reply
မငယ်နိုင်က တစ်မျိုး။ ကျွန်တော်ပြောတာ သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ မြန်မာ ဆိုတဲ့ ဆရာဂျီးဇော်မျိုးကိုပြောနေတောဗျ။
May 7, 2010 at 7:44 PM Reply
ဘူးသံချပ်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပြိုင်လို့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရ တယ်ဆိုတာ ဘာအထောက်အထားနဲ့ ပြောတာတုန်းဗျ။ ရုရှက ပညာတော်သင်တွေ မုန့်ဖိုး တစ်လ ၅၀ ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ကွက်တိဖစ်နေပီ။ ခင်များလည်း ဘားမားတူဒေးနဲ့ သိပ်မထူးပါလား။
May 8, 2010 at 1:54 AM Reply
စည်တယ်ဗျာ၊ အတိုချုပ်လေး ဝင်ပြောအုံးမှပါပဲ။
(ဆရာ) “တင့်” ညွှန်တဲ့ လင့် ကိုသွားကြည့်လိုက်တာ ကွန်မင့်ပေးတဲ့ လူတွေပေါင်းရင် တပ်မ တစ်မလောက် ကောင်းကောင်းဖွဲ့နိုင်တာ တွေ့မိလို့ ဖျားသွားတယ်ဗျာ။
“ဟစ်တိုင်” က ဆောင်းပါးကတော့ “သူ့အတွေး သူ့အမြင်” ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှိနေတာမို့ ဆီထမင်းနယ်စားသလို ဆားကလေးတစ်ဖျစ်လောက် ရောစားဖို့ လိုမယ်လို့သာထင်ပါတယ်။ မှန်တယ်၊ တဝက်တပျက်မှန်တယ်၊ မှားတယ် ဆိုတာတွေကတော့ ဖတ်သူတွေကပဲ ကိုယ်ပိုင်အတွေး (common sense) နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် အသုံးပြုခွင့်ပေးရမှာပါပဲ။ တဆင့်တက်ပြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့ အတွေး (critical thinking) တွေသုံးနိုင်ကြရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့။
တည့်တည့်ပြောပေါင်းများလို့ စိတ်ဆိုးခံရတာတွေလည်း ဝနေပြီမို့ သွယ်ဝိုက်ပြောလိုက်တယ် လို့သာမှတ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။ အမှတ်သညာနည်းပေသူမို့လည်း မေ့လောက်ရင် အမှန်တွေကို ငယ်ထိပ်တင်းပုတ်နဲ့ထုသလို ပြောမိကောင်းပြောမိအုံးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
May 8, 2010 at 2:18 AM Reply
Greece မှာ ကွန်မြူနစ်တွေ အင်အားတက်လာပြီ :) EU ပျက်တော့မယ်ထင်တယ် ။ အမေရိကန်မှာလည်း ပြည်သူတွေအတွင်းမှာ မကျေနပ်မှုတွေ အရမ်းကို ကြီးထွားလာနေတယ်။ ပေါက်ကွဲဖို့ အချိန်နီးလာပြီလို့လဲ ပြောနေကြတယ်။ လူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဒီမိုဝါဒကြီး နေ၀င်မယ့်အချိန် နီးလာပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမတည်မြဲပါလားနော်။ စစ်အဏာရူးတွေက . . . .ဆိုရှယ်လစ်အချိန်မှာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီမိုခေတ်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုလမ်းစဉ်ဆိုပြီးလိမ်နေတယ်။ 2010 မအောင်မြင်ရင် စစ်တပ်ကအဏာထပ်သိမ်းပြီး . . . . ကွန်မြူနစ် ပြန်ပြီး ခေတ်စားတယ်ဆိုရင် . . . မြန်မာ့ ကွန်မြူနစ်လမ်းစဉ် လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာလား? :) ။ ဒီမိုသမားတွေကလဲ အဲဒီအချိန်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒအတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ကျမှာလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… စစ်အကျီဝတ်ပြီး ကြိုက်သလိုလိမ်ပါ။ စစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတွေက ထောက်ခံမှာပါပဲ။
May 8, 2010 at 7:21 AM Reply
မွတ်ဆလင်ကုလားဇော်မျိုး က ဘလော့ပိုင်ရှင်ကေ၇းခွင့်ပေးထားလို့ ၀မ်းသာနေပုံပဲ...
သူ့မှာ သွားစရာလာစရာဆိုလို့ ကျေးစေတမန် နဲ့ ပိတောက်မြေ ပဲရှိတယ် အဲဒီကပဲ သူ့ကို လက်ခံထားတယ်...ကျေးစေတမာန် နဲ့ ပိတောက်မြေကလည်း သူ့ကို တံမြတ်စည်းလှည်း ကြမ်းတိုက် အိမ်သာဈေး အလုပ်လေးပေးခိုင်းပြီး ဆဲခိုင်းထားတာ....
အခု ဒီထိရောက်လာတယ်ဆိုတော့ ခွေးချေးကျုံးဖို့ အလုပ်လာလျှောက်တာဖြစ်မယ် :D
May 8, 2010 at 8:43 PM Reply
မြင့်မြတ်သည့်မဟာမြန်မာဝါဒီသခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★ ဆရာ ဆရာ ဆိုက်ကားအားလား????ဒီလူကြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ပုဒ်တွေ တပ်ပြီး တကယ်ကို အာဏာရူး ရူးနေတဲ့ေ-ာက်ရူးကြီးပါ.......
ခင်ဗျားကြီး ဒီကိုလာခဲ့ ခင်ဗျားကြီးကို ဆရာကြီး ဂိုဏ်းချုပ်တင်ပေးမယ်~~~~
May 8, 2010 at 9:41 PM Reply
ဆောရီးပါ Anonymous ဆရာတင့်ရေးတဲ့ ကျန်းမာရေးပညာပေးပို့စ်တခုမှာ ဆရာတင့်ကို အဲဒီလို တယောက်ဝေဖန်တာ ရှိခဲ့ဖူးလို့ ကျွန်မက အခုလည်း ဆရာတင့်ကို ပြောတယ်ထင်သွားတယ်။ ဆရာတင့်ကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
ကိုမန်းကိုကို မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒုတိယ Anonymous ပြောတာ ကျွန်မလက်ခံတယ်။ ကွာတာက ရုရှားက စစ်သားတွေ ဒေါ်လာ ၅၀ ရတယ်ဆိုတာက ပို့စ်တခုထဲမှာ ဖြစ်နေပြီး အခု သံချပ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရတယ်ဆိုတာ ဒီမှာရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့စာရင် ပို့စ်က အချက်အလက်က ပိုပြီး အခြေအမြစ် ရှိဖို့တော့ လိုအပ်တယ်။
ကိုဇော်မျိုး ဒုတိယ မှတ်ချက်က ဒီထဲမှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဘယ်အချက်နဲ့မှ မဆိုင်ဘဲ တခြား ဘလော့ဂ်တွေက ပို့စ်တိုင်းမှာလည်း ဒီမှတ်ချက်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို တခြားပို့စ်အောက်မှာ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်လို့ ဒီမှာ ကူးယူပြီး ပို့စ်တခု လုပ်ထားပေးတာ ဖြစ်လို့ မဆိုင်တာတွေ ထပ်တင်လာတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ တင်ထားတာ ဆွေးနွေးထားတာနဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ ရေးစေချင်ပါတယ်။
ကက်ကင်းနဲ့ Jalann က ကိုဇော်မျိုး မဆိုင်တာကို ပြောထားတာကို ထပ်ပြီး ပြန်ပြောထားပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်း ပါလာတဲ့အတွက် ဆက်ပြောနေရင် မဆိုင်တာတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ Slip ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်အပေါ်မှာလည်း ကျွန်မတို့ တော်တော်လေး ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်လို့ မူလ Slip ပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောစရာ မရှိရင် ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီပို့စ်မှာ မဆိုင်တာတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ဆက်မရေးတော့ဘဲ မူလ Slip ပြောထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောစရာ ရှိမှပဲ ဆက်ရေးဖို့ အားလုံးကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ လာရောက် ဆွေးနွေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 8, 2010 at 11:25 PM Reply
တကယ့်ကို အနှစ်ရှိတဲ့ ကွန်မန့်တွေပါ
ဇော်မျိုး(ဆောက်ရှူး)ဆိုတဲ့ ကောင်ကလွဲရင် အားလုံး အတွေးအခေါ်တွေ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဒီပိုစ့်မှာ အားလုံးဟာ မဗေဒါ ဘလော့နဲ့ပတ်
သက်ပြီး ဖြေရှင်းရင်းကနေ ဒီနေ့လို အထိ ဖြစ်
အားလုံးကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္န ရှိကျတဲ့လူတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလို အမြင်တွေကွဲပြားတာကလဲ ရပ်တည် မှုခြင်း၊ ဖြတ်သန်းမှုချင်း မတူညီကျလို့
ကိုslip၊ ကိုဒေါ်လာ နဲ့မငယ်နိုင်၊ အန်တီမဗေဒါ တို့ရေ
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အားလုံးအဆင်ပြေ ဘက်မျှပြီး အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားပြီး နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် ကြိုးစားလိုက်ကျရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဗျာ။
အတိုက်အခံတွေလဲ မြန်မာပါပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်လဲ မြန်မာတွေပါပဲ။
ဘာလို့များ မြန်မာအချင်းချင်း ပုတ်ခတ်တော့မလဲ ကောင်းတာလေးတွေကို အားပေးအားမြောက် လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်နောက်ကျနေတာ ခုလို မြန်မာအချင်းချင်း မစည်းလုံးကျတာလဲ ပါတယ်။
ကိုslip = အစ်ကိုရေးထားတာတွေဟာ အကောင်းမြင် ၀ါဒလေးနဲ့ ကိုယ့်ဆိုလိုရင်းကို ထိထိမိမိ ရေးသားထားလို့ တကယ်ကိုပဲ ကွန့်မန်အနှစ်အဆီတွေ ဖြစ်လို့ တကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်။
ကိုဒေါ်လာ = အစ်ကိုစိတ်ရင်းက နည်းနည်းကြမ်းပေးမဲ့ စိတ်အခံက မြန်မာကိုကောင်းစေချင်တာတွေ များနေလို့ မငယ်နိုင်အတွက် ကသိကအောင့်ဖြစ်ရတယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်းပဲလေ ဆိုတဲ့ စိတ်လေး ၀င်လိုက်ရင် ရိုင်းပင်းလာပါလိမ့်မယ်အစ်ကို။
အန်တီဗေဒါ = အန်တီရေးလိုက်တဲ့ပိုစ်လေးက ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ ခုလို ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့ အန်တီလဲ ထင်ခဲ့မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုဆို အန်တီနဲ့ မငယ်နိုင် (ဒီမို ဘက်ကပေါ့နော်) အားလုံးလဲ သိသွားကြပါပြီ။ အန်တီစိတ်ထဲက လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လေးလုံးကိစ္စကြီးကို ခုထိ ရင်ထဲမှာ ခံစားမနေပါနဲ့တော့ အန်တီရေ။ ၂၁ ရာစုခေတ်အမြင်လေးနဲ့သုံးသပ်ရင် အားလုံးအာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကောင်းဖို့ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘာလို့ ကိုယ့်အချင်းချင်မြန်မာလူမျိုးချင်းကို ပုတ်ခတ်နေတော့မလဲ အန်တီရာ။ ဘက်မတူပေမဲ့ အားလုံးဟာ နိုင်ငံအတွက်ပဲ မဟုတ်ပေဘူးလား။ အန်တီလဲ လူမှုရေးပုတ်ခတ်ခံခဲ့ရတာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး အန်တီ။
အန်တီ ကွန်မန်တွေ မတွေ့ရဘူးနော် ဘက်မတူပေမဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ရေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
မငယ်နိုင် = အစ်မက ကိုSLIP ကို အကောင်းဘက်အမြင်လေးနဲ့ ပြန်ပြီးဆွေးနွေးထားတာတွေ့ရလို့ တိုက်ပွဲလေး ငြိမ်းအေးစပြုပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါမဲ့ ကိုဒေါ်လာနဲ့တော့ ညှိနေတုန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုဒေါ်လာ စိတ်ရင်းကောင်းပါတယ် အစ်မ။ သူက မခံမရပ်နိုင်တာ သူကွန်မန့်ကို အစ်မက လက်မခံလို့ သူက အရွဲတိုက်တာလဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ မြန်မာကိုကောင်းစေချင်တာတွေ များလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘက်မတူပေမဲ့လဲ ခုလို ပြေပြေလည်လည် ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် အားလုံးအစားဝမ်းသာပါတယ် မငယ်နိင်။
အန်တီဗေဒါ ဘလော့မှာတော့ မငယ်နိုင် ၀င်ရေးတုန်းက သိပ်သဘောမတွေ့မိဘူး။
ဒါမဲ့ ကိုSLIP နဲ့ ဆွေးနွေးတာကိုဖတ်ရတော့
စကားမစပ် အစ်မဆိုဒ်က မောက်စ် အလံကလေးက မြန်မာအလံလေးဆို သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။
အားလုံးပဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အရမ်းကို သူများနိုင်ငံတွေထက် နောက်ကျနေတယ်ဗျာ တကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာကြီး အတိုက်အခံတွေ လုပ်နေမဲ့အစား အားလုံးဝိုင်းပြီး အကျိုးပြုနိုင်မဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ လုပ်ကြပါစို့လား..........
May 9, 2010 at 1:18 AM Reply
အနောက်ဖက်တွေမှာ တချိန်တုံးကဆိုရင် လင်မယားနှစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲမှာ အိပ်တာတောင် ဘယ်လိုအိပ်ရမယ်ဆိုပြီး ဥပဒေမျိုးတွေထုတ်ခဲ့တယ်ဗျ။ မိုဟာမက်ကြီးကလည်း မွတ်ဆလင်တွေကို ရေချိုခန်းထဲဝင်ရင် ညာဘက်ခြေထောက်ကနေ စလှမ်းပြီးဝင်ရမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ (ချေးယိုသေးပေါက်.. မျက်နှာသစ်.. အကျီဝတ်အားလုံးကို စည်းကမ်းတွေထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူ့စည်းကမ်းကို မလိုက်နာရင် Allah က မီးရှို့အပြစ်ပေးမယ်တဲ့) မြန်မာပြည်ဒီမိုဝါဒကြီးရခဲ့လို့ . . . မငယ်နိုင် သမ္မတဖြစ်ရင် . . အဲလို ဥပဒေမျိုးတွေထုတ်မယ့်သူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အစိုးရဆိုတာ နေရာတကာ ဥပဒေထုတ်တာ မသင့်တော်သလိုပဲ .. . စည်းကမ်းဆိုတာကြီးကို လက်လွတ်စပါယ်မထုတ်ရဘူးဗျ။ နေရာတကာ ဥပဒေထုတ်ပြီးလူတွေကို ထိမ်းချုပ်တဲ့ အစိုးရကို .. အဏာရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ နေရာတကာ စည်းကမ်းထုတ်တဲ့သူကိုတော့… ပစိပဇတ်နိုင်သူလို့ပြောကြပါတယ်။
မငယ်နိုင်ရေ. . . အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး….. အကောင်းဆုံးကတော့ . . . လူ့ဘောင်ကနေ ထိမ်းပါစေ။ ဥပက္ခာပြုသင့်ရင်လည်းပြုလိုက်ပေါ့။ အရမ်းကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆဲဆိုနေရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ဒီမှာ ကျုပ်ရေးတဲ့ကော်မန့်ဟာ ဘယ်သူတွေကို ထိခိုက်သွားလို့လဲ? ကျုပ်ရဲ့ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကော်မန့်ကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အရမ်းခံစားသွားရတဲ့သူတွေရှိရင် အဲဒီလူဟာ ကလေးဆန်လို့ပါပဲ။ မဆီမဆိုင်တာတွေမရေးနဲ့ပြောရအောင်… ဒီခေါင်းစဉ်ကိုက.. မဆီမဆိုင်လို့ ခွဲရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေဗျာ။ ကျုပ်ဆုံးမချင်တာက . . . . နိုင်ငံရေးသမားလုပ်ရင် ဦးသန်းရွှေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန် အတင်းပြောနေရုံနဲ့မပြီးပဲ.. ကိုယ်တိုင်လဲပြုပြင်စရာရှိတာ ပြုပြင်မှဖြစ်မယ်နော်။
ကလေးစိတ်နဲ့ အသက်ကြီးနေတဲ့ အဖိုးအဖွားကြီးတွေကို ရင့်ကျက်အောင် ဆုံးမနေတဲ့
(p.s. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီး… မလိုအပ်တဲ့ အပိုစကားပြောပြီး ပိတောက်မြေမှာ ဆရာလုပ်တဲ့အစ်မကို.. ဆရာပြန်လုပ်ခံရတာ ခံစားချက်မပျင်းပါနဲ့လို့ပြောလိုပါတယ်။)
May 9, 2010 at 2:17 AM Reply
ဟားဟား…. တကယ်ကိုရယ်ရပါလား။ အခုတော့ ဒီမိုတွေက လူကောင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီလား? ဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာ။ မင်းက ဒီဘလော့မှာပဲ ငါ့ကိုပြောရဲတယ်? ဒီမိုသမားတွေကို မင်းတို့နိုင်တိုင်း.. ဒီမိုဘလော့မှာလာပြီး အာမကျယ်နဲ့လေကွာ။ (နအဖစစ်ဗိုလ်ကို နိုင်တာငါပဲရှိတယ်… ဟိဟိ) တတိယလူဟန်ဆောင်လိုက်.. ဒီမိုသမားဟန်ဆောင်လိုက်နဲ့ . . . . ဒီမိုသမားတွေကို အရူးလုပ်ခဲ့တာတွေမမေ့နဲ့ဦးလေ။ တကယ်လို့ ဒီမိုသမားတွေကို အပြစ်ပြောတာ.. မြန်မာအချင်းချင်း အတင်းပြောတာကို ဆန့်ကျင်ချင်တယ်ဆိုရင်.. ဒီမှာမပြောနဲ့။ ကျေးစေတမန်ဘလော့မှာသွားပြောလေကွာ။ ကျေးစေတမန်က NLD ကို အပုတ်ချနေတာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကလည်း အများကြီးပဲ။ ဟဲဟဲ.. ဘယ်လိုလဲ? စစ်အကျီဝတ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေကို ဝေဖန်ရဲလား?
ပဇိပဇတ်များသည့် ဒီမိုဘလော့မှာ နအဖစစ်ဗိုလ်တွေကို အနိုင်ကျင့်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့
May 9, 2010 at 9:34 AM Reply
9 May 10, 03:09
((((အနာဂါတ်လမ်း: စာလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ငယ်နိုင်နဲ့ slip တို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်အချို့ကိုဖတ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်ရေးသားနိုင်တဲ့အထိ အချိန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်တာလေးစားမိပါတယ် တော်တော်ကိုအလေးအနက်ထားပါလားလို့))))
ပို့စ်နဲ့ သက်ဆိုင်နေလို့ C-Box က ကူးယူလာတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီတပတ် ကျောင်းရော အလုပ်ပါ အားလပ်ရက်နဲ့ ကြုံလို့ပါ ဦးကျော်ထင်။ ကျွန်မတို့အားလုံးက အမြင်တွေသာ ကွဲနေပေမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့ အောက်ခြေက အပြန်အလှန် ပြောနေလို့ တိုင်းပြည်က ဘာမှ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အခုကျွန်မတို့ ပြောသလို ပြောကြမှပဲ တိုးတက်မှာဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ပြောသလို သူတို့ပြောရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာတော့ တွေးမိပါတယ်။
-ကိုဇော်မျိုးတယောက်ကတော့ ပြောလေကဲလေ ဖြစ်နေပြီ။ "ဒီခေါင်းစဉ်ကိုက မဆီမဆိုင်လို့ ခွဲရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေဗျာ" လို့ အကြောင်းပြပြီး ကိုဇော်မျိုးက တခြားမဆိုင်တာ ၀င်ရေးလို့ မရပါဘူး။ Slip ကကျတော့ ကျွန်မက သူ့ C-Box မှာ သွားရေးထားတဲ့ အကြောင်းကို သူကတုံ့ပြန်ပြီး ပြန်လာရေးလို့ ပို့စ်တခု လုပ်လိုက်ပေးတာ၊ ကိုဇော်မျိုးက ကျွန်မတို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာမှာ ၀င်လာဆွေးနွေးသူဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ပြောနေတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ သွားရမယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ စည်းကမ်းထုတ်တာ အာဏာရှင်ဆန်ပြီး စည်းကမ်းထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးသွားဖို့ မောင်းနေတဲ့ကားကို မန္တလေးကိုပဲ မောင်းရမယ် ညာဘက်ကို ခွဲထွက်ပြီး လျှောက်မောင်းနေရင် ရှမ်းပြည်ကိုဖြတ်နယ်စပ်ဖြတ်ပြီး မန္တလေးမရောက်ဘဲ တရုတ်ပြည်ဘက် ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဘယ်ဘက်ကို ခွဲထွက်သွားရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ အန္ဒိယတို့ ဘက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မန္တလေးကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ရောက်ဖို့အတွက် မောင်းတဲ့သူဟာ လမ်းသိဖို့လိုတယ်။ လမ်းသိလို့ လမ်းကို တည့်တည့်မောင်းဖို့၊ ဘယ်ညာ မခွဲထွက်ဖို့ ပြောတာကို မဆိုင်တဲ့ ဥပမာတွေ ပေးပြီး အာဏာရှင် ဆန်တယ်လို့ ကျွန်မကို ပြောတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
ကျွန်မက နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး မိမိဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးနဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေကို ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည် အေးချမ်းရင်လည်း ကျွန်မက တောကလာတဲ့သူ တောကိုပဲ ပြန်ပြီး လူထု ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ မသန်စွမ်းကလေးတွေ စောင့်ရှောက်ရေးတွေလို အလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားသူ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးတွေပဲ လုပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးကို အစိုးရပဲချိုးဖေါက်ဖေါက် အတိုက်ခံပဲ ချိုးဖေါက်ဖေါက် အကုန်လုံးကို ဖေါ်ထုတ်တဲ့ သာမန် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ အဖြစ်ပဲ လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ နိုင်ငံရေးပါတီ တခုခုမှာ ဘယ်တော့မှ ၀င်လုပ်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုဇော်မျိုး ပြောသလို သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဘယ်တော့မှ သမ္မမတဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ကိုဇော်မျိုး စိတ်ချ။ မဆိုင်တာတွေ ထပ်မရေးဖို့ ကျွန်မ ထပ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
May 9, 2010 at 11:21 AM Reply
"တိုင်းပြည် အေးချမ်းရင်လည်း ကျွန်မက တောကလာတဲ့သူ တောကိုပဲ ပြန်ပြီး လူထု ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ မသန်စွမ်းကလေးတွေ စောင့်ရှောက်ရေးတွေလို အလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားသူ ဖြစ်တယ်။"
အခြေအနေကြောင့်အပြင်ရောက်နေသူလို့ မငယ်နိုင်ကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ မဗေဒါဘလော့ကနေ ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပါ အစ်မ။ အစ်မခံယူထားတဲ့ အဲဒီစိတ်ဓာတ်က ကျွန်တော်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။
တောမပြန်ခင်မှာ ဆေးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပို့စ်တွေများများရေးနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ :D :) နောက်တာမဟုတ်ဘူးနော် အစ်မ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးပညာအသိအားနည်းပါတယ်။ သိကိုမသိတာပါလေ။ ဟားဟား။
ကျွန်တော်သိသလောက် မြန်မာလို ဆေးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေအရမ်းနည်းနေသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအလုပ်ဟာ လက်ငင်းအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးဘလော့ကတော့ အောင်မြင်အောင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြပေမယ့် ဖတ်မကုန်နိုင်အောင်ပေါပါတယ်။
ဆိုတော့... အစ်မရဲ့ တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့အလုပ်နဲ့ လိုနေတဲ့ကွပ်လပ်လေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ၀င်ဖြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်...
လူတိုင်းကတော့ အစ်မရေးသမျှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ လူတိုင်းပြောလို့ရတဲ့ ဒီမိုအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုး။ ပညာရပ်ပိုင်း။
ဒါပေမယ့် အစ်မရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါတစ်ပုဒ်ကြောင့် အစ်မမမြင်နိုင်တဲ့နေရာက လူတစ်ယောက် ကျန်းမာရေး အသိတစ်ခုရသွားမယ်ဆိုရင်...
ဒါမမဟုတ် အစ်မလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို နောက်မျိုးဆက်က တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ဆိုရင်....
အစ်မတစ်ယောက်သည် နောက်မျိုးဆက်က လူ ၂ ယောက်ကိုပဲဆွဲခေါ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့မီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် နောက်ကျနေတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။
February 7, 2011 at 2:49 PM Reply
မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Alter. ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် တင်ထားတာ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်တွေက ကျန်းမာရေး/ဇိဝသိပ္ပံ Label အောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုမို ပြည့်စုံတဲ့ ကျန်းမာရေးပို့စ်တွေကို လေ့လာချင်ရင် Public Health in Myanmar မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိဖတ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Label မှာ ရှာပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။